Somali - 01. Conversation - Booklet 8: Waa Inuu Qofkasta oo Muslim ah Yey Noqotaa Masiixi Dhiman? | Grace and Truth
Home -- Somali -- 01. Conversation -- 8 Persecution of Converts
8 - WAA INUU QOFKASTA OO MUSLIM AH YEY NOQOTAA MASIIXI DHIMAN?
Haddii Muslimiintu ay ka gudbi karaan caqabadahaas murugsan, markaa dhibaato kale ayaa ka soo baxda, haddii uu isagu doonayo inuu noqdo Masiixi: Shareecada Islaamka ayaa amreysa in la dilo haddii uusan toobad keenin isla markaana uu Islaamka qaato. Tallaabooyin noocee ah ayaan qaadi karnaa si aan uga caawino qofka Muslimka ah inuu aqbalo Masiixa inkasta oo xaqiiqdaani jirto iyo caqabadaha kale ee Masiixi ah ee asal ahaan ka soo jeeda Muslimka ay tahay inuu wajaho markuu Masiixa raacayo. Baro sida loogu diyaariyo iyo sida looga jawaabo xaaladaha noocaas ah adiga oo akhrinaya buugyarahan.
8.02 -- Guusha Ruuxa ah ee ka sareysa Dariiqa Islaamka ee Nolosha
8.03 -- Joogitaanka ama ka tegida qoyska?
8.04 -- Isdhaxgalka Isbadalada KujiraKaniisadaha
8.05 -- Baaris
8.01 -- Waa Inuu Qofkasta oo Muslim ah Yey Noqotaa Masiixi Dhiman?
Rasuul Bawlos wuxuu ku qirtay dhammaan kuwii ka soo wada noqday diinta Yuhuudda iyo Islaamka ee Masiixa: Waxaa naloogu tiriyaa sidii ido la gawracay (Sabuurradii 44:22), laakiin, waxyaalahan oo dhan waxaan kaga liidannaa kii noo jeclaaday (Rooma 8:36-37).
Rasuulkii quruumaha ayaa xaqiijiyay qirashadan dhimashadiisa markii la gowracay sanadkii 63 A.D., sida James oo ahaa walaalkii ciise, kaas oo la dilay sanad ka hor. Butros, sidoo kale, ayaa la sheegay in lagu qodbay Rooma dhexdeeda 64 AD Sayidkii soo sara kacay wuxuu siinayaa qaar kamid ah taageerayaashiisa fursad ay kaga qeybqaataan silica (Rome 5:3-5; Filippi 1:20-23; 2:16-17; Kolosay 1:24; 2 Timoteyos 2:10-13; 1 Butros 4:16.19).
Geerida, sida Bawlos u qoray, waa erey adag, sida looga gudbayo uu ka kooban yahay dhammaan qaybaha fikirka iyo nolosha kuwa xaq ah. Kuwa ka yimid diinta Islaamka waa inay ka tanaasulaan dhaqankoodii hore iyo ruuxa diintooda talaabo talaabo ah, maadaama ay iimaan ku korayaan ilaa ay si buuxda ugu dhexjiraan Ciise Masiix iyo kaniisadiisa.
Qof kasta oo kala hadlaya muslimiinta arrimaha ku saabsan ciise masiix iyo saluuggiisa wuxuu ogaan karaa inay jiraan seddex caqabadood oo hor leh oo laga gudbi karo la-taliye kasta oo xagga diinta ah oo raba inuu xaliyo dhibaatooyinka ugu waaweyn ee Islaamka.
• Masiixa, wiilka Ilaaha nool
Marka hore, qofka muslimka ahi wuu diidayaa fikrad kasta oo ku saabsan ilaahnimada ciise masiix. Habdhaqankan awgeed wuxuu iska fogeeyay inuu wax qoro oo ogaado Ilaah inuu yahay Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Wuxuu diidi doonaa midnimada Saddexanka Quduuska ah wuxuuna gooni uga soocayaa madax furashada dhameystiran. Wuxuu dafirayaa xaq-soorida nimcadiisa mana doonayo inuu wax badan maqlo mudnaantiisa dhalashada. Markhaatiga u ah Masiixu waa inuu waydiiyaa Ciise siyaabo waxtar leh iyo habab looga dhaadhiciyo qofka muslimka ah in wiilka Maryan yahay Wiilka Ilaah ee inaga badbaadiyey dembiyadeenna.
Kan Wiilka haystaa, noloshuu leeyahay. Kii aan Wiilka Ilaah haysanna nolosha ma leh. (1 Yooxanaa 5:12)
Maaha wax caqli gal ah ama gargaar ah in lala bilaabo wadahadal lala yeesho qofka muslimka ah adoo ku adkaysanaya in Masiixu yahay Wiilka Ilaah, sababta oo ah in badan oo muslimiin ah ayaa fahansan hadalkan inuu yahay aabbe ku xeel dheer cilmiga Eebe ee Maryan, oo si xun uga falceliya arrintaas.
• Iskutallaabta Masiixa
Caqabada labaad ee qofka muslimka ah inuu fahmo Masiixa iyo furashadiisa ayaa ah diidmada iskutallaabtiisa (Sura al-Nisa '4:157). Qofka muslimka ahi maysan fahmin macnaha geerida Ciise xaggeenna, amase qafiskiisa qafistiisa iyo ka bixista dembiyadayada dhammaan dembiyada. Ma jiro qof Muslim ah oo dambigiisa dhaafi doona ilaa uu diido Masiixa iskutallaabta lagu qodbay! Qof kasta oo kala hadlaya muslimiinta abuurista iyo xukunka, oo ku saabsan Ibraahim iyo Muuse, oo ku saabsan mucjisooyinka Masiixu iyo kor u qaadistiisa Ilaah wali ma uusan taaban xudunta dhibaatada. Waa inaan ka caawino qofka muslimka ah inuu garto inuu yahay dambiile. Markaa waanu u sharixi karnaa inuu Masiixu dembiyadeenna qaatay (Yooxanaa 1:29-31).
• Saxnimada Kitaabka Quduuska ah
Caqabadda saddexaad ee suurta gelineysa inuu qofka muslimka ahi rumeeyo Ilaaha ah Aabbihiis, waa tuhunkiisa qoto dheer oo ah in Kitaabka Quduuska ah la been abuuray. Dhaawackan oo ka hooseeya suunka shareecada ayaa ruuxa islaamku wuxuu baabi'iyay aaminaada dad badan oo muslimiin ah oo Tawreed iyo Injiil ah. Waxay aamminsan yihiin in waxkastoo Yuhuudda iyo Masiixiyiintu sheegaan yihiin sheekooyin, sheekooyin iyo qaladaad. Qof kasta oo raba inuu caawiyo qofka muslimka ah inuu garto badbaadada loo dhammaystiray isaga ee Masiixa, waa inuu ku abuuro isaga aaminaad ah in Kitaabka Quduuska ahi yahay erayga runta ah ee Eebbe iyo muujinta aan isbeddelka lahayn.
Saddexdaas caqabadood maahan dhibaatooyin caqliyeed oo keliya oo lagu caddeyn karo caddaymo macquul ah iyo doodaha ku habboon qaabka Islaamka. Halkan waxaan ka helnaa khiyaanooyin ka soo horjeeda Masiixiyiinta iyo silsilado wadareed kuwaas oo lagu baabi'in karo nimcada awoodda Ruuxa Quduuska ah. Salaadaha - iyagoo aaminaad leh in salaadahaas la maqli doono - waa mid muhiim u ah wacyi gelinta muslimiinta sidoo kale waxay markhaati u tahay is-hoosaysiinta iyo runta, oo uu Ruuxu hagayo. Jacaylka Ciise Masiix, si kastaba ha ahaatee, wuxuu sii ahaanayaa luuqadda gala xabsiga ugu mugdiga badan.
• Ka gudubka fikirka Islaamka ee Eebbe
Markii qof magaca Ciise ku abtirsada saddexda caqabadood ee horudhaca diidmada Islaamka, waxaa laga yaabaa inuu gaadhay dhibaatada udub-dhexaadka Islaamka. Fikradda Alle waxay go’aamisaa dhaqanka islaamka ee dhammaan dhinacyada, iimaanka, nolosha, sharciga iyo caadooyinka. Si kastaba ha noqotee, kama adkaan karto cabsidooda dhimashada, iyo gariirkooda maalinta xukunka soo socota. Dhammaan meelaha islaamku waxay ku urursan yihiin insha Allah. Qofka muslimka ah waa ka yar ama ka yar yahay muuqaal yar oo Eebbe ah. Qof kasta oo raba inuu caawiyo isaga oo ka baxsan diinta Islaamka waa inuu u sharxaa Aabbaha Ciise Masiix inuu yahay jawaabta ruuxiga ah ee Injiilka si loo fahmo Allah.
• Waa kuma Allah?
Qofka muslimka ahi wuu ku qirtaa maragnimadiisa iimaanka: Ilaah kale ma jiro Eebe mooyee. Allah kaliya waa hal, waligiis sedex! Isagu waa nin aan la qiyaasi karin, aadna u fog yahay, waana midka kaliya ee awoodda leh. Dhamaan fikradaha fiqi ahaaneed ee ku saabsan isaga waa kuwo aan ku filneyn oo khaldan. Magacyadiisa iyo astaamihiisu way isdhaafsan yihiin oo mararka qaarkood iska dhaafa. Wax caqli ah oo aadanuhu qaban karin maaddada Sublime One. Isagu wax walba wuu u sii bartay wuxuuna u baahan yahay soo gudbinta wadarta qof walba. Allah ma aha ilaah jacayl aan xad lahayn. Wuxuu duuduubaa cidduu doono, wuuna hanuuniyaa cidduu doono (Suurada al-Anacam 6:39; al-Raad 13:27; Ibrahim 14:4; al-Nahl 16:93; al-Fatir 35:8; al-Muddathir 74:31). Isagu ma aha ilaah run ah, maxaa yeelay isagu wuxuu isu sheegaa inuu yahay qofka ugu khiyaanada badan (Suuradda Al 'Imraan 3:54; al-Anfal 8:30; al-Nisa' 4:142). Isagu waa kan kibray (Suuradda al-Hashr 59:23). Naxariistiisa waxaa loo hibeeyey oo kaliya muslimiinta ilaahay ka baqa ee bixiya lacagtooda una dagaallamaya fidinta Islaamka (Suurada al-Baqara 2:195; Al 'Imran 3:76,134,148,159; al-Ma'ida 5:13,43,93; al-Tawba 9:4,7,108; al-Mumtahana 60.8 et al.). Ruuxa Islaamku wuxuu neceb yahay Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah wuxuuna si buuxda u diidayaa Trinity (Sura al-Ikhlas 112:1-4, et al.).
• Aabahayaga jannada ku jira
Jawaabta udub dhexaadka ah ee injiilku u leeyahay hoosta islaamnimada Eebbe waa Aabaha Ciise Masiix. Ilaaha Qaadirka ahu waa Aabbeheenna (!) Kan weligiis innaga xidhay, dembiilayaal laga sameeyey boodhka, xagga axdiga Wiilkiisa Ciise Masiix, oo innaga subkay Ruuxiisa Quduuska ah. Injiilkeenu ina nama bari karo fogaan fog, aan la arki karin iyo mid la fahmi karo, laakiin wuxuu ina tusayaa Aabaha dhow iyo kan shaqsiyeed. Isaga wuu daryeelaa qof kasta shaqsiyan wuuna na ogyahay sidaan annaga qudhayda u og nahay. Wuxuu tirin jiray timaha madaxdeenna (Matayos 10:30; Luukos 12:7). Wuxuu naftiisa u huray oo keliya inuu inaga badbaadiyo xukunka kama dambaysta ah. Ruuxiisa Quduuska ah wuxuu doonayaa inuu na dhex joogo. Ilaah waa aabbeheen, oo ina soo korsaday sifo sharci ah oo dib noo noogu soo nooleeyey. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ina hagayaa oo aan ku ammaaneynaa magaca Aabbaha nolosheenna.
Farqiga u dhexeeya Islaamka iyo masiixiga wuxuu u weyn yahay sida farqiga u dhexeeya Eebe iyo Aabaha Ciise Masiix. Diinta qofka muslimka ahi waxay u horseedi doontaa si dhakhso ah ama goor dambe toodh-qabad ka dibna loo diido qalbi jabka, Eebbe, ilaa uu kan badbaadiya ka badbaado isaga oo ku dhaca gacmaha fidsan ee Aabbeheenna jannada ku jira.
Kala guurka noocan ahi ma aha oo keliya inuu caqliga ku yimaado, laakiin waa isbeddelka jira oo dhan ee qofka. Dhammaan qaybaha nolosha waa in loo beddelaa muuqaalka aabaha. Markuu noqdo Masiixi ma suurta gasho inuu qofka muslimka ah ku sii dhex muuqdo dhaqankiisa islaamka muddo dheer. Dhammaanba jiritaanka jiritaankiisa waa in loo jiheeyaa xagga Aabbaha. Tukashadii, wuxuu bartay inuu la hadlo Aabihiis, oo isaguna kaga jawaabi doona Kitaabka Quduuska ah. Markii uu Muslimku noqdo ilmo Ilaah, waa inuu qaadaa Muxamed oo uu gashado Masiixa! Wuxuu heli doonaa mudnaanta si loogu weyneeyo dhaqanka Ciise Masiix oo uu xubin ka noqdo qoyska Aabaheenna jannada ku jira. Taas macnaheedu waa diidmada noloshiisii ​​hore iyo cusboonaysiinta iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah. Qaadashada tallaabada koowaad ee bilowgu micnaheedu waa gelitaanka adduun ruuxiga ah oo Islaamku uusan aqoon. Ruuxa Aabaheenna wuxuu doonayaa inuu dhex maro dhammaan nolosha noloshiisa. Isdaahirin, ninna Rabbiga arki maayo! Cusboonaysiinta la'aantiis qof kuma sii jiri karo Masiixa. Isbedelkani wuxuu sii ahaanayaa ficil nimcadii Aabaheen, illaa iyo inta aan dhageysanno Wiilkiisa oo aan uga mahadcelinno siduu noogu yeedhay.
• Dabin dhaqan iyo mid diimeed
Haddii qof uusan gooni isu taago xagga Eebbe, laakiin uu isku dayo inuu isku xidho Ilaaha Aabbaha ah, iimaanka cusubi wuxuu ku jiraa madaxa oo keliya, laakiin qalbigiisa ma gaadho. Dad badan oo beddelaad ah ayaa joogsanaya kala badh. Mid ka mid ah diinta Islaamka ayaa yidhi, "Waxaan gartay oo rumaystay in Eebbe yahay aabaha jannada ku jira ee i siiyay nolosha weligeed ah." Wuxuu Masiixi la ahaa masiixiyiinta, laakiin markuu arkay xaasaskiisa iyo carruurtooda iyo eheladooda ayuu muslimka ku noqday muslim. Natiijadu waxay ahayd nooc ka mid shisoofrania. Kala duwanaansho cad oo u dhexeeya iftiinka iyo mugdiga, inta u dhaxaysa dhimashada iyo nolosha, ayaa ku jira dardaaranka mustaqbalka. Xiriirka iimaanka lala leeyahay Ciise Masiix wuxuu ku qasbay qofka muslimka ah inuu ka noqdo Eebe, oo aabaha ku sii jiro. Laakiin Muslimiintu badankood way ka gaabiyeen inay dhammeeyaan leexintaas mar; waxay inta badan ku sameeyaan talaabo talaabo ah, markay sii koraan iimaanka. Laakiin ma jiraan wax guryo la helo iyadoon laga leexan.
• Waa maxay nimcada?
Qur'aanka dhexdiisa ereyga "nimco" wuxuu ku soo arooray 38 jeer. Muslimiintu waxay rumeysan yihiin inay ku hoos nool yihiin nimcooyinka joogtada ah ee Eebbe. Laakiin Islaamka dhexdiisa, nimcadu waxay ka dhigan tahay wax ka duwan Kitaabka Quduuska ah. Allaha u naxariistee wuxuu u sugnaaday muslimiintaas xoogga, guulaha badan, caafimaad qaba oo sharaf leh. Qof caruur badan leh, xoolo dhaqato ah, baabuuro, geel raacda iyo lacag ayaa mudnaan gaar ah u leh Allah inuu helo nimco nimco. Eebbe Muxammad wuxuu u horseeday xagga Zainab, oo ahayd naagtiisii wiilkiisii korsaday Zaid, isagoo weli guursanaya (Suuradda al-Ahzab 33:37Taas oo horumarinteeda loogu yeerayo nimcooyinka Eebbe)!
Injiilka, si kastaba ha noqotee, nimco waxay ka dhigan tahay, marka hore, cafiska dambiyada! Ciise si xor ah ayuu ina siiyaa xaqnimo, maxaa yeelay isagu wuu xanuunsaday oo wuu ku dhintay annaga. Badanaa, kuwa saboolka ah, kuwa buka, dadka da'da ah iyo kuwa murugaysanba way ku fahmaan nimcada Ilaah si ka dhaqso badan kuwa taajiriinta ah, kuwa xoogga leh iyo kuwa quruxda badan, kuwaas oo had iyo goor madhan. “Waxaa barakaysan kuwa saboolka liita!” (Matayos 5:3). Marka lagu daro caddeynta nimcada, rumaystayaasha waxay helaan hadiyadaha nimcada, kuwaas oo ah midhaha Ruuxa Quduuska ah: jacayl, farxad, nabad, dulqaadasho, roonaan, wanaag, aaminnimo, qabownimo iyo is-xakameyn (Ga-ayaanka 5:22-23). Qofka badalaya waa inuu bartaa in hodanka maadi, qiyamka cilmaani, sharaf adduun, ahaanshaha saxda ah iyo lahaanshaha awooda ay badanaa ka soo horjeedaan hadiyadaha ruuxiga ah ee aan ka helnay Aabaheena jannada ku jira.
• Dembille mise Dembiga?
Diinta islaamku waxa ku yaal buugaagta dheer ee dembiyada darajooyinka: dembiyada yaryar, ficillada loo dulqaadan karo, dembiyada aan la aqbali karin, dembiyada dhabta ah, dembiyada ka dhanka ah sharciga (shareecada), dembiyada, falalka xun, dembiyada waaweyn iyo dembiga aan la cafin karin. Qur'aanku wuxuu barayaa in qofka muslimka ahi tirtiri karo mid kasta dembiyadiisa falalka wanaagsan ee wanaagsan, marka laga reebo kuwa ku jira qaybtii u dambaysay (Suurada al-Tawba 9:111; al-'Ankabut 29:7). Isagu isuma arko inuu yahay dambiile! Ereygaas wuu kharribi lahaa oo xumaan lahaa reerkiisa oo dhan! Waxaa loo arkaa inay ceeb tahay in la yiraahdo qofka muslimka ah waa dambiile!
Masiixiyiinta dhabta ahi way ogyihiin inay yihiin dambiilayaal oo luntay markay isbarbar dhigayaan wanaagga iyo quduusnaantooda Aabahood jannada ah. “Qofna ma jiro wanaag mooyee Ilaah kale maahee” (Matayos 10:18). Waxaan ka buuxnaa cilado, cilado, guuldarooyinka iyo cambaareynta dabiiciga aadamiga. Ma jiro bini-aadam naftiisa ku wanaagsan. Kaamilnimada Aabahayagu waxaay cadeyneysaa dambigeenna (Matayos 5:48). Dembiyadeenna iyo xad-gudubkeenu waxay ka soo baxayaan qudhun aan dhammaanayn. Kaliya nimcada Ciise Masiix ayaa ah rajadeenna. Dhiigiisa wuxuu inaga nadiifiyaa dembiyadeena oo dhan, oo Ruuxiisuna wuxuu ku dhisaa abuur cusub. Haddii qofka muslimka ah uusan aqoonsan inuu xumaantiisa ku yahay iftiinka Ilaah ma yaqaan inuu yahay kiis rajo la'aan ah, laakiin wuxuu ku sii fikiraa inuusan u baahnayn badbaadiye ama allabari meeshii uu ku sugnaa!
• Saadaalin ama doorashada?
Qur'aanka wuxuu barayaa muslimiinta in Eebbe yahay Adkaade Falsan, Eebaha wax walba og. Cawaaqibka fiqi ahaaneed ee ka dhashay astaamahan ayaa ah inuu isagu horay u sii gartay qof kasta iyo waxkasta oo ugu yar faahfaahin (Suras al-Furqan 25:2; al-Qamar 54:49; al-Talaq 65:3). Ilmaha hooyadiis hooyadiis si buuxda ayaa loo go'aamiyaa laga bilaabo maalinta 40aad ee jiritaankiisa (Sura al-Najm 53:32). Dembiyada oo dhan, hibada iyo dhacdooyinka noloshiisa ayaa horay loo sii qorsheeyay. Qur'aanku wuxuu ku adkaystay in Eebbe xitaa u ballamay muslimiinta oo dhan in lagu nadiifiyo jahannamada (Sura Maryam 19:71,72)! Intaa ka dib, si kastaba ha noqotee, Eebbe wuu badbaadin doonaa kuwa isaga ka cabsada, ama ku hubaa lacag badan oo ku diriray Dagaalkii Quduuska ahaa. Dhimashada qotada dheer waxay hoos udhacdaa dunida islaamka, oo had iyo jeer ay kujirto kacsanaanta shucuurta.
Waraaqda ku socota Efesos (cutubka 1:3-4) Masiixiyiintu waxay akhrin karaan in Aabaheenna jannada ku doortay Ciise Masiix inuu ku noolaado nolol quduus ah hortiisa isaga, jacaylkiisa, si loo waafajiyo muuqaalka uu jecel yahay Wiil (Rooma 8:29-30). Doorashadani nama daboosho sidii oo kale oo wax dabacsan, laakiin waxay ina dardar gelisaa si aan u jeclaano, ammaano oo ugu adeegno qiiro iyo qumman. Waa Aabeheenii hore inoogu doortay ciise masiix, mana aha ilaah-caato ah oo xardhan. Barnaamijkiisa aasaasiga ah waxaa loo arkaa bilowgii Bilowgii 1:27 oo ay weheliso ballaarintiisa ruuxiga ah ee Matayos 5:48 iyo Yooxanaa 14:9-11.
• Runta mise been?
Islaamka dhexdiisa waxaa si rasmi ah laguu oggol yahay inaad ku jiifto afar xaaladood: Dagaal Qudus (markaad la hadlayso dadka aan muslimiinta ahayn), markay tahay in laba qof oo muslimiin ah ay is waafaqaan midba midka kale, ninkeeda naagtiisa, afadana ninkeeda. Dhaarta xun waa la jebin karaa (Sura al-Tahrim 66:2). Eebbe laftiisu wuu khiyaaneeyaa kuwa isaga khiyaaneeya (Suuradda al-Nisa '4:142). La yaab maahan in ganacsiga dunida Islaamka iyo nolosha aysan ku salaysnayn isku halaynta, runta iyo daacadnimada.
Ciisena wuxuu yidhi: Haaahdiinnu ha ahaato ee Haah, haah, maya, maya; wixii intaas ka dambeeya sharkuu ka yimaadaa” (Matayos 5:37). Ciise qudhiisu waa run (Yooxanaa 14:6). Ruuxa Quduuska ahi waa run (Yooxanaa 14:17; 16:13). Aabbeheenna jannada ku jiraa waa run (Yooxanaa 4:24). Ereygiisu waa run (Yooxanaa 17:17). Qofka badalaya waa inuu - sidayada oo kale - bartaa inuu run noqdo! Jacaylka aan runta lahayn waxay noqonaysaa been; Waa inaan barannaa inaan runta ku wada hadalno jacayl, iyo inaan ku darno adeegga jacaylka iyo runta injiilka.
• Hal xaasle ama hal xaasle ah?
Qur'aanku wuxuu u oggol yahay Muslimiinta inay guursadaan mid, laba, saddex ama afar naagood, inta nin karti u leeyahay inuu si isku mid ah u daryeelo (Sura al-Nisa '4:3). (Sharcigaan waxaa laga noqdey turkiga, Morrocco iyo Tunisia). Xitaa sidaas oo ay tahay, muslimiintu badankood ma awoodo inay guursadaan wax kabadan hal ama labo xaas sababtoo ah ma helaan lacag ku filan. Si kastaba ha noqotee, guurka islaamka looma tixgelinayo mid ahaanshaha lammaane siman. Ninku wuu edbin karaa afadiisa, oo markay adkaysato wuu garaaci karaa (Sura al-Nisa '4:34). Ninku wuu ka sarreeyaa afada, sida, maxkamada gudaheeda, maragnimada laba haween ahi waxay la mid yihiin kan muslimka ah (Suuradda al-Baqara 2:282). Intaas waxaa sii dheer in si sharci ah loo oggol yahay inuu dumarka addoommo ah ka guursado mar alla markii uu doonayo. Qur'aanku wuxuu u oggolyahay nin inuu xukumo amarkiisa sida aabe yar oo kale. Midnimada sayga iyo afada si loo xalliyo dhibaatooyinka wada noolaanshaha ma ahan mowduuc islaam ah. Diinta islaamku waxay ka dhigan tahay hoosaad, sidoo kale guurka.
Masiixu wuxuu xaqiijiyay hal guurka in loo idmaday tan iyo abuurista (Mark 10:6-9). Rasuul Bawlos wuxuu qirtay in naagtu ay ninkeeda hoos tagi doonto, laakiin ninku waa inuu naftiisa naftiisa u huraa nafsaddiisa, sidii Masiixu naftiisa ugu huray kaniisaddiisa (Efesos 5:21:33). Mawduuca guurka masiixiga maahan midka xukuma, laakiin kan jecel oo u wada adeega lamaanahaaga! Maaddaama farqiga u dhexeeya Eebe iyo Aabaha Ciise Masiix, sidaas oo kale ay u kala duwan yihiin fahamka guurka iyo nolosha qoyska ee la taaban karo ee labada diimood.
• Macallimiinta dugsiga
Waayihii hore - iyo mararka qaar xitaa maanta - macalin Qur'aan ah wuxuu ardayda kula qasbay Suuradaha kala duwan ee Qur'aanka. Waxay ahayd inay bartaan iyaga qalbigooda. Macalinku wuxuu dul fadhiisiyey ardaydiisa sida Allah oo kale carshigiisa. Ma uusan dhiirigelin fekerka iyo fahamka shaqsiyeed, laakiin wuxuu ku sii bartay wax ku barta qalbiyada iyo aqriska. Jiilkii macallimiinta Qur'aanka waxaay u qaabeeyeen dhaqanka Islaamka sidii hab fikir aan caadi ahayn looga dhex arko Muslimiinta.
Bey'ada masiixiga, macalin wanaagsan waa saaxiib aabe oo iskudaya inuu ku hogaamiyo ardeydiisa garashadooda, fakarkooda, falanqaynta iyo isku dubaridka. Shaqsiyaddiisa ayaa dhisi karta ardayda wax kabadan waxbaristiisa. Isagu carshigiisuu ku fadhiyaa, Oo wuxuu ku fadhiistaa iyaga. Masiixu wuxuu naftiisa ka yidhi: "Wiilka Aadanahu uma iman in loo adeego laakiin inuu adeego iyo inuu naftiisa dad badan furashadooda u bixiyo" (Matayos 20:28). Fikradda ah adeegga aaminka ahi wuxuu dhex maraa dhammaan qaybaha Masiixiyiinta ah ee nolosha, halkii uu ka talin lahaa xukunka. Tani waxay u baahan tahay dib u eegis dhammaystiran, ma aha oo keliya nolosha kuwa beddelaya Islaamka, laakiin qof kasta, maxaa yeelay rabitaanka in lagu faano waxa ku jirta qof walba.
• Shaqo adag iyo daryeel bulsheed
Yurub gudaheeda dadku way dhoola cadeeyaan oo dhahaan qofka yaqaan waxa shaqada micnaheedu tahay oo aan ka fogaanin, waa inuu waalan yahay! Orient dad badani waxay ku noolyihiin mabda'aani. Wadamada islaamka shaqaalaha waxaa badanaa loola dhaqmaa sidii adoon. Meelaha baadiyaha ah, oo aysan weli ku taabanin hantiwadaagga weli, sayidyada dhulka ee beeraha waxaa lagu sharfay sida ilaahyo yaryar. Kuwa ku tiirsan waxay dhunkadaan gacmaha iyo cagaha. Badanaa shaqaaluhu waxay helaan mushaarkooda laba ama saddex bilood soo daaho si aysan u cararin. Mar, markay shaqaalaha warshadi ku taal magaalada ay bilaabeen shaqo-joojin, milkiiluhu si fudud ayuu u iibiyey warshaddiisii wuxuuna eryay dhammaan shaqaalahiisii.
Millatariga Suudaan waxay mararka qaar hareereeyaan tuulooyin ku yaal koonfurta, toogtaan ragga oo waxay u qaadaan dumarka iyo carruurta addoomo ahaan. Sharciga addoonsiga ee Quraanka iyo Shareecada wali lama baabi'in. Muslimiintu waxay isu fahmeen inay yihiin fasalka sayidyada. Xayawaanka xoolaha nool waa in la dilaa ama la addoonsadaa. Yuhuudda iyo Masiixiyiintu waxay u jiri karaan sidii “ilaaliya” muwaadiniinta heerka labaad waxaana loo oggol yahay inay u adeegaan sayidyadooda Islaamka (Sura al-Tawba 9:28-29).
Masiixu, si kastaba ha noqotee, dhexdeena ayuu ku dhex noolaa sidii midiidin. Isagu waa nin naxariis badan oo jilicsan. Wuxuu u shaqeeyey sidii nijaar, oo ma u ahaa sidii ganacsade. Ciise wuxuu u yeedhay kalluumaystayaasha qalloocan ee la socda si ay u raacaan, kuwa loo yaqaan inay si adag u shaqeeyaan Masiixu ma magacaabin sayidyo, laakiin waa addoommo. Ilaaheennu waa naxariis badan yahay, oo naxariis buu leeyahay. Kii raacaa wuxuu la mid noqon doonaa ekaanshihiisa. Loo shaqeeye aamin ah ayaa daryeeli doona shaqaalahiisa mana u isticmaali doono. Socialism wuxuu ku kori karaa oo keliya halka Masiixiyaddu ay diyaarisay dariiqa loogu talagalay.
• Dimuquraadiyaddu ma Islaam-nacaybbaa?
Dalka Lubnaan, waalidiinta ayaa mararka qaarkood carruurtooda u bixiya magacyo qalaad: Napoleon, de Gaulle, Bismarck, Stalin iyo Nasser. Kuwaas waxaa laga heli karaa liistooyinka isqorista ee iskuulada iyo shahaadooyinka. Mar macallin baa dariiqa ka yeedhay oo macallin kale u yeedhay: “Hitler wali ma bixin khidmadii iskuulka! Dad badan oo reer Bari ayaa sugaya nin xoog badan oo musuqmaasaqa ka baabi'in doona xaaqin birta. Gamal Abd al-Nasser, Khomeini iyo Saddam Hussein waxay ahaayeen kalidii taliyeyaal aad ufara badan, waxaa raacay badanaaba. "Saddam waa boqorka dunida!" Ayaa lagu aqrin lahaa darbiga gidaarka islaamiga ah ee kuyaala magaalada Secunderabad, India! Muslimiintu waxay sugayaan kalimado-yaqaanno, kuwa yar-yar Eebbe, maahan madaxweyne dimoqraadi ah oo lagu dooran karo ama laga bixi karo. Waxay diyaar u yihiin inay u dagaallamaan sanamyadooda, sida Hisbollah iyo Xamaas ay naftooda ugu huraan Eebe.
Laakiin Ciise wuxuu yidhi: Boqortooyadaydu tan dunidan ma aha. Anigu waxaan ahay boqor. Sababtaas aawadeed ayaa la ii dhashay, oo taas ayaan dunida u imid, inaan marag u furo runta. Qof kasta oo runta ah wuu i maqlaa (Yooxanaa 18:36-37). Qofka muslimka ahi waa inuu bartaa inuu fahmo wixii Ciise ku yidhi Butros: Seeftaada meesheedii ku celi, waayo, kuwa seefta qaada oo dhan seef baa lagu qaadan doonaa (Matayos 26:52).
Kii u yimaadda Ciise waa la beddeli doonaa: Kuwa kibirka badanu waxay noqon doonaan kuwa is-hoosaysiiya, kuwo caajisiin ah oo hawl badan, kuwa is-hoosaysiiya, iyo kal-kaaliye reerka ka mid noqon kara. Rumaysadka Ciise wuxuu ina beddelaa u ekaanta Aabbihii jannada ku jira. Markaan tukanayno: “Quduus magacaagu ha ahaado,” codsigani waa inuu ku keenaa kacdoon ruuxi ah qalbiyadeenna, kaniisadahayaga iyo kuwa ku beddela fikradaha aan caadiga ahayn. Isbeddellada ruuxiga ah ayaa lama huraan u ah qof kasta oo raba inuu noqdo Masiixi qaangaar ah. Waxa keliya oo lagu sheegi karaa awoodda iyo jacaylka Aabbiheen (Rooma 5:5) xagga Rabbigeenna ah Badbaadiyeheenna Ciise Masiix.
Dadka ku nool Bariga Dhexe iyo muslimiin badan guud ahaan uma shaqeeyaan shaqsiyaad marka hore. Waxay si dhow ugu xiran yihiin qoysaskooda dhiigga, nafta iyo caadada. Waxay ku nool yihiin sida "annaga" oo ay weheliyaan eheladooda iyadoo la raacayo mabaadi 'isku mid ah, isku diin ah, iyo mas'uuliyad isweydaarsiga midba midka kale. Kuwo badan ayaa guursaday ama loo doortay daraasado sare, ama waxay galeen xilal dowladeed saameyn ku leh go'aankii qabiilka. Qoys la'aantiisa ama qabiilkiisa la'aantiis reer Orient waxba kama jiraan wuxuuna dareemayaa lumitaan.
Magaalooyinka waa weyn qofku wuxuu ku nool yahay cidlo wuxuuna si tartiib tartiib ah uga baxaa silsiladda qabiilkiisa. Markaa bariga bari maanta wuu ka guurayaa "innaga" oo usocda "I". Muslimiintu waxay noqonayaan shaqsiyaad. Laakiin xiriirkooda tuuladooda wali waa ka xoog badan yihiin sidii loogu soo dhaweyn lahaa magaalo weyn.
Qofka reer galbeedka wali uma dhicin heerka umada dhexdeeda baahideedu. Isagu iskuma tirin karo inuu yahay tiro. Weli uma uu hoos u dhicin inuu magac la'aan noqdo sida kuwa badan ee Ameerika iyo wadamada warshadaha ee Yurub. Wali wuxuu xubin ka yahay beeshiisa.
Injiil badan oo wacdiyeyaal ah waa inay ka gaabiyaan markay ugu yeeraan shakhsiyaad muslimiin ah inay go'aan u gaaraan Masiixa, maxaa yeelay iyagu maahan "I", laakiin waxay u nool yihiin qayb ka mid ah "annaga". Kaliya maahan qalbigooda gaarka ah inay go’aansadaan, laakiin xubnaha kale ee qabiilkooda ayaa leh fikirkooda.
● Qabiilka - caqabadda ugu weyn ee isu beddelka Masiixa!
Xaraashka dhaqameed ee ka dhex dhaca qabiilka ayaa ah caqabadda ugu adag ee qofka muslimka ahi inuu noqdo Masiixi! Qoysku uma oggolaanayaan inuu ka baxo khadka. Ma jiro boodh boodh ah oo ku dhacaysa sharafta qabiilka, aad bay uga yar tahay qof kasta oo ka mid ah inuu noqdo dib-u-dhig, gaal ama qof beddeli kara. Haddii qofka muslimka ahi uu noqdo shuuciyad ama caqiido taas oo loo dulqaadan karo loona tixgelin karo in uu yahay weecinta ruuxiga ah ee ku jirta horumarkiisa. Laakiin hoog waxaa leh xubin qabiil oo noqda Masiixi! Kooxda diinta islaamku waxay ku adkaysanaysaa in goynta wiil ama gabadh ay tahay calaamad ka sinaysa hooyadeed ama hooyadeed! Isku soo wada duuboo qabiilku wuxuu doonayaa inuu kusoo rogo addeecid adag xubin kasta oo ka mid ah xubnaheeda, xagga diinta iyo bulshada.
Haddii qof doonayo inuu wacdiyo dadka muslimiinta ah waa inuu booqdaa qoyska qof xiiseeya haddii ay suurogal tahay, oo uusan shakhsigu ka soocin. Waaliddiinta iyo qaraabadu waa inay arkaan in saaxiibada cusub ay yihiin dad la aamini karo oo daacad ah. Waa muhiim in laga fogaado aamin-darrooyinka maadaama kooxaha, xisbiyada, fanaaniinta iyo gaangisku ay waliba isku dayaan inay soo jiitaan shakhsiyaadka.
Waxaad ka akhrinaysaa Qur'aanka in qofka muslimka ahi aanu saaxiibo la yeelan Masiixiyiin ama Yuhuudi, maxaa yeelay kuwaasi nabad ugagama tegi doonaan ilaa uu noqdo sida iyaga (Sura al-Ma'ida 5:52.57 et al). Laakiin isla mar ahaantaana waxaad ku akhridaa Qur'aanka in Masiixiyiintu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan cadowga muslimiinta sababta oo ah way u naxariisanayaan oo ma yihiin kuwa kibirsan (Suuradda al-Ma'ida 5:82).
Khibradda waxay muujineysaa in xaaladaha badankood qabiil dhan uusan aqbali doonin in la wacdiyo. Si kastaba ha noqotee waa inaan isku daynaa, xitaa haddii keliya shan illaa toban boqolkiiba kiisaska in qoyska oo dhan laga guuleysan doono Ciise markii aad u dhowaato qabiilka. Runtii way dhacdaa mararka qaarkood!
● Xanuunkii xanuunka badnaa ee ka yimid qabiilka
Marka waalidiinta ama lammaanaha is qaba ay arkaan in mid ka mid ah qoyskooda uu akhrinaayo Kitaabka Quduuska ah ama buugaagta kale ee Masiixiyiinta ah ma diidaan fikirkaan mar kaliya laakiin waa u dulqaadan karaan mararka qaar xitaa way soo dhaweynayaan. Da'da sayniska iyo warbaahinta qof kasta waa in lagu wargaliyaa wax kasta - laakiin ma ahan kuwa rumeeysan oo iska dhiibaya! Aqoonta kitaabiga ah waa la aqbalaa, laakiin waxay ku nuuxnuuxsadeen in wixii qoto dheer ee quseeya iyo waxkasta oo diinta masiixiga ah ku xidhan diinta masiixiga ay tahay wax laga xumaado.
Isla markii ay cadaato in da 'yarta ama dadka waaweyn ee raadinaya ay si dhab ah u daneynayaan Masiixa iyo Injiilkiisa, adeerka waxaa sida caadiga ah la weydiiyaa inuu la hadlo qofka su'aasha ah, si loogu celiyo dib ula dhaqankii qabiilka, si looga digayo ama xitaa hanjabaad, haddii uusan runtii ballan qaadayn inuu ka tagayo gaalnimada aan fiicnayn ee Masiixiyiinta.
Haddii digniinta noocan oo kale ah ee qoysku aaney saameyn ku yeelan, ganaaxyo taxane ah oo tiro yar laakiin kordhaya ayaa la hirgalin doonaa. Lacagta jeebka waa la joojiyey, dharki waa qarsoonaa, iskuul imaatinkiisii ​​waa la joojiyay, waxaa jira garaacis, xiisad iyo muran ka dhex dhaca qoyska, waraaqaha waa la laalay, ama boostada waa la laaluushay si uusan waraaqaha ugu keenin ‘dambiilaha’. Asxaabtiisa iyo macalimiintiisa ayaa lagu wargaliyay inay cadaadis saari doonaan isaga, dhaawaca jireed ee garaacida daran ayaa ah cabirka ciqaabta. Gabdhuhu waxay ku xiran yihiin qolal yaryar iyagoon haysan cunno iyo biyo, garaacista maalinlaha ah waxay dhaqan gelisaa soo gudbinta shuruudood. Xaaladaha aadka u daran qofka waxaa lagu wargaliyaa booliiska eedeymo been abuur ah, oo keeni kara jirdil naxariis darro ilaa ay ka caddaato in dembigu yahay "kaliya" diin oo aan tahriibin, khaniisnimo ama khiyaano. Hanjabaadaha dhimashada waa in loo qaato si dhab ah haddii ay ka yimaadaan xubnaha qoyskooda. Waxaas oo dhan waxaa lagu fuliyaa nacayb, qadhaadh iyo cabsi. Rasuul Bawlos wuxuu qoray: "Runtii, waxaan wajahaynaa geerida maalinta oo dhan, laakiin waxyaalahaas oo dhan waxaan kaga liidaa kuwa ka adkaada kan ina jecel."
● Nolosha weligeed ah ma laha dhamaadka
Si loo muujiyo sida lataliyeyaasha ruuxiga ahi aysan u dhaqmin xaaladdan oo kale, waxaan la xiriirnaa sheekada dhacdo run ah:
Bangladesh adeegayaal shisheeye ah ayaa fursad u helay koox dhalinyaro ah oo da 'yar oo ay da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 18 sano. Qaarkood waxay aqbaleen Masiixa. Muhaajiriinta xiisaha lihi waxay kula taliyeen: “Aad guriga u tag oo u sheeg qoysaskaaga in Ciise ku siiyay nolosha weligeed ah!” Nur ul-Alam addeeciddii ayuu adeecay, gurigiina ku tegey oo aabihiis ku yidhi: "Aabe, Ciise wuxuu i siiyay nolosha weligeed ah! Aabuhu wuu eegay wiilkiisii ​​wuxuuna weydiyay:" Kumaa ku siiyay waxaas? "Wiilkii ayaa ku jawaabay:" wiilki Maryan ayaa naftiisii ​​iyo jacaylkiisii ​​qalbigayga gelisay. ”Aabihii ayaa markaa u yeedhay wiilashiisii ​​ka weynaa:“ Soo qaado ulaha qoryaha! ”oo wuxuu ku amray inay garaacaan walaalkood ilaa iyo inta jinnigu ka tagayo. Nur ul-Alam wuxuu yiri: "Way i garaaceen ilaa ay daalanayeen." Markaas aabihiis ayaa yimid oo weydiyay: "Hada miyaad xor ka tahay nafta shisheeye ee kugu soo gashay?" Wiilkii ayaa ku jawaabay: "Aabe, nolosha weligeed ah aniga weligeed baa jirta. Isna igama tegi doono. Kolkaasaa aabihii u yeedhay walaalihiis, oo soo bixiya mindiyooyinka! Oo dharkiisay jidhkiisii ​​ka jareen, oo jaranjaradiina maqaarka ku gooyay, oo qoorta iyo lugaha lugu gooyay. Markii wiilku hor taagnaa iyaga oo dhiig baxaya, ayaa aabihii mar kale yimid oo weyddiiyey: "Hadda miyaad ka xor tahay nafta khiyaanada weligeed ah?" Laakiin wiilkii oo ooyaya ayuu ku jawaabay: "Aabe, waad i dili kartaa. Laakiin waxaan sii noolaan doonaa weligiis. Noloshu cusub ee Ciise waligeed igama bixi karto. ”Aabbihii xanaaq buu ku amray wiilashiisii ​​ka weyn:“ Soo qaado milix iyo basbaas! ”Waxay ku duugeen dhir udgoon kulul maqaarkiisa madax ilaa cag. Xanuun buu ku qeyliyay. Iyagu way la qayliyeen, maxaa yeelay waxay doonayeen inay ka badbaadiyaan cadaabta. Way sii adkaysan kari waayeen howshii waxayna sii daayeen inuu jiifsado cusbo iyo basbaas qolkana ka baxo. In yar ka dib wiilkii wuxuu u cararay habeenka, wuxuu ku tuuray webiga si uu udgoodo dhir udgoonkiisa, wuxuu helay doon yar wuxuuna ku sigtay guriga adeegaha, albaabka ayuu garaacay oo sugaa.
Markuu ninkii albaabka furay oo arkay wiilkii uu dhiiggu ka horreeyay, wuu argagaxay wuxuuna yidhi: “Waxaa kuu wanaagsan inaad gurigayga soo gasho, maxaa yeelay iyagu waa ku daba socdaan. Aad dhawr kiiloomitir u tag guriga aaminka ah ee beesheenna, way ku soo kaxaysan doonaan. Wiilkii, oo lagu calaamadiyey iskutallaabyo badan, ayay ahayd inuu keligiis tago habeenkii!
Howl wadeenada waa inaysan ka faa iideysan dhalinyarada badalayaal ahaan iyagoo ku badiya qaababka reer galbeedka, laakiin waa inay fahmaan deegaankooda, dareemaan oo ay la xanuunsadaan iyaga masuuliyadna iska saaraan.
● Xigmad iyo aaminnimadu waa lama huraan
Bilowga rumaysadka waa inaan loogu yeerinin inuu si dhakhso ah u bixiyo maraggiisa; Ilmaha dhashay wali ma sii socon karo oo wuu hadli karo. Mu'minka cusubi waa inuu marka hore ku bislaadaa hadalka, xikmadda, ducada iyo jacaylka, ilaa isagu - oo leh ereyada saxda ah, waqtiga saxda ah - uu qiran karo caqiidadiisa cusub. Badanaa isagu si furan ugama hadli karo qoyskiisa, laakiin wuxuu ka marag kacayaa habka uu ku nool yahay, adeegayaashiisa, naxariistiisa iyo tukashadiisa in wax cusub ay soo galeen noloshiisa.
Qofka badalaya waa inuusan ka tagin guriga aabihiis xiisadaha iyo cadaadiska darteed. Haddii lagu tuuro albaabka hore waa inuu galo albaabka dambe. Ma jiro qof jecel isaga wax ka badan waalidkiis! Aamusnaantiisa firfircoon, adeegyadiisa cod-bixinta iyo dib-u-soo-noolaynta waalidkiis ayaa had iyo goor si cad uga hadlaan ereyada dhalin kara nacayb iyo xanaaq. Si kastaba ha noqotee, sida ugu dhaqsaha badan noloshiisa oo qatar ku jirto, lataliyaha ruuxiga ah ee mas'uul ah, kooxda ama kaniisada uu kuweeda leeyahay, waa inay galaan, ilaaliyaan oo xuquuqdooda u istaagaan. Laakiin marka la bixinayo caawinaadaas oo kale waa inay ka digtoonaadaan haynta dadka da'da ah, maadaama sharcigu uusan oggolayn.
Wada-hawlgalayaasha guurka waxaa loogu hanjabay furiin haddii ay Masiixa rumaystaan. Ka tagida Islaamka waa mid ka mid ah kiisaska yar ee ay naagtu codsan karto furitaan. Markaa carruurta ayaa iska leh iyada. Haddii nin furo naagtiisa sababta oo ah waxay rumeysan tahay Masiixa, waxay lumineysaa dhammaan xuquuqaha carruurteeda waana laga saari karaa guriga. Ma qiyaasi karno waxa ay hooyooyinka qaar ku xanuunsadaan Ciise dartiis adduunka Islaamka.
● Baxsiga iyo dariiqyada
Muslimiintu marar dhif ah ayey u dhaqmaan si xun oo jirdil iyo dilid xubnaha qoyskooda. Sedex meelood labo meel dadka muslimiinta ah waa kuwa ka badan ama ka yar tabar yar waxna kama qabtaan diinta. Laakiin si aysan u lumin sumcadooda iyo aqbalaadda bulshada islaamka ma awoodo inay sii xajiimaan. Waxay isku dayaan inay ka soocaan qofka xariiqda ka baxay, ama hadday suurta gal tahay u diraan dibadda.
Laakiin saddex meelood meel dadka muslimiinta ah waxay muujiyaan nacaybkooda markii mid ka mid ah xubnaha qabiilkooda u jeesto Ciise. Waa inay ciqaabaan si ay u badbaadiyaan, haddii kalese, waxay isku dayaan inay burburiyaan. Labada dhinacba waa xanuun badan marka mid ka mid ah uu noqdo Masiixi, laakiin in yar oo ka mid ah ayaa ku filnaada oo isu diyaariya inay dilaan nin reer guuraa ah.
Maalmahan rumaystayaasha cusub ee ku jira khatarta badani ma sugaan muddo dheer, laakiin way cararaan kahor intaan la dilin. Waxay la dhuumanayaan asxaabtooda ama waxay u baxsadaan waddamo magacyo lagu soo qaatay.
Masiixi ah oo aan wali madax-bannaanayn “Aniga” oo ku nool “annaga” ee qabiilkiisa ayaa raba inuu u hoggaamiyo qaraabadiisa ugu dhow Ciise markii uu helay ruuxa jacaylka Masiixa ka dib markii la isku raacay. Laakiin taasi waa sax sababta ugu weyn ee ay u diidi karaan isaga oo aad u sii nebcaadeen (Yooxanaa 16:1-4). Si kastaba ha noqotee kuwa beenta cusubi rumaysad bay ku xukumaan maraggii rasuul Bawlos oo ku canaantay waardiyaha, “Rumayso Rabbi Ciise, waad badbaadi doontaa, adiga iyo dadka gurigaaguba” (Falimaha Rasuullada 16:31).
Miyayna ahayn inaan u tudhno kuwa badalaya dhibaatadan? Marar badan oo rumaystayaashu waxay weydiyaan: "Haddii loo jeedsado Ciise wuxuu keenaa xanuunka noocan ah, miyaanay ahayn wax naxariis badan in loo oggolaado Muslimiinta inay ku sii nagaadaan diintooda?" Haddii mid uun u doodo habkaas ma uusan fahmin Muxammad iyo Masiixi midna. Diinta islaamku ma jirto badbaado, dammaanad qaad ma leh in dembiyada la cafiyo, madax furasho, nabad majirto, Ruuxa Quduuska ahi ma jiro nolol weligeed ah. Qofka Muslimka ah oo aan Ciise Masiix ahayn ayaa lumay oo ruux ahaan u dhintay! Wiilka Ilaah oo keliya ayaa odhan kara, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. ‘’Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee’’ (Yooxanaa 14:6). Ma jiro jid loo maro Ilaaha runta ah oo aan ka ahayn iskutallaabta! Hadaad rabto inaad ka celiso kuwa badalaya silica waxaad la mid tahay Butros oo rabay inuu Ciise ka horjoogsado iskutallaabta (Matayos 16:22-23). Jawaabta daran ee Ciise ayaa quseysa dhammaan kuwa doonaya inay ka ilaaliyaan rumaystayaasha cusub silica.
Sayidkeennu wuxuu si cad u yidhi, "Qof kasta oo guryo uga tagay, ama walaalo, ama aabbe, ama hooyo ama carruur ama beero ii leh, injiilkuna wuxuu heli doonaa boqol laab intaas, wuuna dhaxli doonaa nolosha weligeed ah (Matayos 19:28-30; Mark 10 : 29; Luukos 18:29). Ciise xitaa tallaabo ayuu qaaday oo wuxuu yidhi, ‘’Kan aabbihiis ama hooyadiis iga jecel, ima istaahilo; oo ku alla kii wiilkiisa ama gabadhiisa iga jecel, ima istaahilo; oo ku alla kii aan iskutallaabtiisa soo qaadan oo aan i soo raacin, ima istaahilo. Kan naftiisa helaa waa lumin doonaa, oo kan naftiisa u lumiya aawaday waa heli doonaa” (Matayos 10:37-38; 16:24-25; Luukos 9:23-26; Yooxanaa 12:25).
Way fududahay inaad ku hadasho ama u qorto ereyadan kuwa kale, laakiin way adagtahay in loo dulqaato. Sidaa daraadeed waa waajibkayaga cad inaynu aqbalno dhammaan rumaystayaasha la silcin karo dartiis Ciise aawadood qoyskeenna ruuxiga ah oo aan daryeelaan illaa ay naftooda daryeelaan.
Waqtiga uu Masiixigu rumaysi kusii kordhayo isla markaana ka fogaanayo “innaga” oo ka tirsan qabiilkiisa, wuxuu la kulmaa tijaabooyin gaar ah oo ay tahay inuu ka adkaado, in kasta oo uu weli yahay bilowga iimaanka.
● Waa maxay muujinta dhabta ah?
Diinta islaam ahaan, qofkii beddelay wuxuu u maleeyay in dhammaan buugaagta la soo bandhigay sida Tawreed, Sabuurrada, Injiilka iyo Qur'aanka oo ka yimi buugga asalka ah ee jannada oo ay is waafaqaan midba midka kale. Laakiin waqti dheer kuma qaadaneyso illaa qofka badalaya uu helayo farqi aan lama buurnayn oo u dhexeeya kitaabka iyo Qur'aanka. Injiilku wuxuu marag ka yahay in Masiixu yahay Wiilka Ilaah 50 jeer, Qur'aanku wuu inkiray 17 jeer. Maalintii ugu dambaysay noloshiisa noloshiisa waxaa lagusoo waramayaa silica iyo dhimashadiisa oo dhan. Laakiin Qur'aanku wuxuu leeyahay, ‘'Ma dilin, iskutallaab kuma ay dhigin. Waxa kaliya ee loo dhigay inay sidaas u muuqato iyaga” (Sura al-Nisa '4:157). Injiilku wuxuu shaaca ka qaaday 187 jeer in Ilaah yahay Aabbahayaga iyo Aabbahayaga. Qur'aanku, si kastaba ha ahaatee, wuxuu leeyahay in Eebbe aabbe ahay, mana jiro isaga la mid ah (Suuradda al-Ikhlas 112:1-4). Kitaabka Quduuska ah waxaan ka akhrinaa hal guurka ka guuridda ah, furriinka oo la mamnuucay, cafinimada cadawgeeda, iyo Ruuxa Quduuska ah oo ku dhex jira kuwa raacsan Masiixa. Buugga Qudduuska ah ee Muslimiinta, si kastaba ha noqotee, Allah wuxuu oggol yahay xaasas badan, furiinku waa xuquuq ninka leeyahay markasta oo uu jecel yahay, waxaa jira waajib rabaani ah oo ah aargudasho ama bixinta lacag dhiig ah, kumana suurtoobayso qof inuu helo ruux rabaani ah - Allah kaligiis waa weyn yahay! Kuwa kale oo dhami waa addoommadiisa - xitaa Ciise iyo Ruuxa Quduuska ah!
Sidaas darteed qofka badalayaa wuxuu wajahayaa su’aasha ah: Buugdee haysaa muujinta dhabta ah iyo midkee beenta ah ama been sheega? Su’aashaas uma baahna inay ka timaado meel ka baxsan. Wuxuu ku dhex jiraa gudaha qalbiga. Ma ahan inaan jawaab bixinno hagaagsan ka bixinno. Isaga laftiisu waa inuu gartaa runta, si uu ugu adkeysto weerarada qabiilkiisa iyo asxaabtiisa. Waa inaan raacno isaga oo duceysan, oo aan u hagno marinnada caawimaadda ee Kitaabka Quduuska ah, oo aan ka fikirno dhibaatooyinkiisa oo dhan, ilaa isagu isagu isagu garto isaga oo adeegsanaya Erayga Eebbe: Kitaabka Quduuska ah oo keliya ayaa ah Erayga runta ah ee Eebbe! Waxaa ka buuxa nolol iyo xoog. Qur'aanku waa marin habaabin, waa muujinta been abuurka iyo soo saarista ruux ka soo horjeedka kitaabiga ah.
● Dembiyo aan la cafin Karin
Tijaabada labaad waxay saameyn ku yeelan kartaa jiritaanka ruuxiga ee rumeeyaha cusub. Qur'aanku wuxuu caddeeyay in saddex dembi oo aan weligood la cafin karin:
Qof kasta waa inkaaran yahay qof kale oo Eebbe ku darsada (Suuradda al-Tawbah 9:29).
Qof kasta oo ka taga Islaamka oo noqda Masiixi ah waa inkaaran saddex jeer (Suuradda al-Baqarah 2:161).
Cadhada Allah waxay ku dhacdaa qofka dila qof Muslim ah si ula kac ah, iyadoo aan sabab loo aarsanin (Sura al-Nisa '4:93).
Qof kasta oo muslim ah u martiqaada Ciise, isla mar ahaantaas ugu yeedhaa inuu sameeyo laba dembi oo aan la cafiyi karin, kuwaas oo islaamku u dhigmo dembiga ka dhanka ah Ruuxa Quduuska ah ee Injiilka. Haddii Masiixi la weydiin lahaa inuu caayo midnimada Saddexanka ah, ma ka fiirsan doono laakiin si xanaaqsan ayuu u diidi doonaa. Caqabada gudaha ah ee uu qofka badalayaa waa inuu ka adkaadaa waa isku mid. Waa inuu si ikhtiyaar ah u dembaabo wax muqadas ah oo isaga ka horreeya, si uu u helo Masiixa iyo nolosha weligeed ah. Waa inaanu waligeen ku cadaadin inuu go'aan deg deg ah gaadho, laakiin waa inaanu raacno duco iyo latalin, oo aan ka caawinno inuu si qoto dheer xidid, dammaanad iyo raaxo ugu helo Injiilka (Rooma 8:14-16; 1 Korintos 12:2-3).
Dhagaha Islaamiga ah waxaa ku jira digniino badan oo Qur'aanka ah oo sheegaya in qof kasta oo ka goosada Islaamka uu waayi doono mudnaantiisa wanaagsan oo uusan haysan wax tusi kara xukunka Eebbe oo isku hagaajin kara dembiyadiisa (Suurada al-Kahf 18) : 105; al-Zumar 39:65; et al.). Laakiin Masiixu wuxuu u xaqiijiyey: "nimcadaydu way kugu filnaatay! Shuqulladaadu kuma filna inay mar uun kuu caddeeyaan. Dhiiggaygu waa xaqnimadaada!"
● Xukuntay dil
Kiniiniga qadhaadh ee qof kasta oo beddela ahi waa inuu liqo waa xukunka ah, marka loo eego shareecada, dib-loo-noqdo waa inuu “dhintaa” (Sura al-Baqara 2:217). Waxaa wax laga xumaado ah, Qur'aanku oran maayo in la dilo. Xaqiiqadan ayaa dhalisay qareennada Islaamiga ah inay eegaan dhaqanka Muxammad ee ah in mid ka mid ah hadaladiisa "oral" uu u baahnaa dilka qof ka soo taqalusay dowlad Islaam ah. Laakiin maadaama xukun dil ah loogu diley qof Muslim ah sabab aan si cad loogu xusin Qur'aanka sharci maahan, qareenada waxay ku riixeen amar ay ku dilaan kuwa badala iyaga oo raacaya isku tanaasulida halyeeyada Islaamiga ah. Waxay ku kala duwan yihiin oo keliya su'aasha ku saabsan muddada muddada fikirka ee laga yaabo in xabsiga laga dhigo inta aan la fulinin xukunka dilka. Dadka qaar waxay dhahaan saddex maalmood, kuwa kalena bil dhan, waqtigaas oo Islaamku markale u sharxayo riddada si dib loogu celiyo xididdada. Hadduu runtii diido wicitaanka soo noqnoqda, ciqaabta dilka waa in la fuliyaa.
Intabadan dawladaha Islaamiga ah, ma fuliyaan dilka kuwa badala! Xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah wey ka soo horjeeddaa shareecada. Sidaa darteed dawladaha Islaamiga ah ee xorta ahi way diidayaan fulinta sharcigaas Islaamiga ah. Waxay tilmaamayaan aayadda quraanka ah ee Quraanka ka hadlaysaysa "geerida" ee kan beddelka oo keliya, laakiin aan ka ahayn "fulinta" ama "dilid" isaga (Sura al-Baqara 2:217). "Eebbe wuu xukumi doonaa wuuna u daynayaa inuu dhinto maalin uun, dowladda awood uma lihin inay dilaan", qaar ka mid ah la taliyayaasha sharciga ayaa yidhi.
Asal ahaan dadka muslimiinta ah si kastaba ha ahaatee si kala duwan ayay ugu fikiraan. Waxay codsanayaan in si buuxda loo hirgeliyo shareecada isla mar ahaantaana la dilo mid kasta oo ka soo noqda isla markaana aan naxariis lahayn. Sidaas awgeeda rumaystayaasha cusub ee Masiixa ee lagu eedeeyay shakiga aan runta ahayn, waa la xiraa, waa la baarayaa, la jirdilay, waxaana la siidaayay muddo bilooyin ah, ilaa ugu dambeyntii siyaasiyiinta shisheeye ama madaxweynayaashu ay eraygooda geliyaan si loo sii daayo. Markii ay xabsiga ku sugnaayeen qaarkood ayaa loo ballan qaaday: haddii aad mar labaad qirtaan caqiidada islaamka laba jeer ayaa lagu siidayn doonaa markiiba. Mid ka mid ah hooyo xidhan ayaa ku jawaabay, Waxaan doorbidayaa inaan la sii joogo Ciise Masiix halkii aan carruurtayda ku ilaalin lahaa Masiixa la'aantiis. Markii aabuhu, aawadood carruurtiisa, uu u adkeeyay diinta Islaamka laba jeer, way ku qosleen oo waxay isaga u sheegeen , ”Waxaad kaliya iska dhigaysay inaad islaamka aqbalay mar labaad carruurtaada darteed. Qalbigaaga waxaad ku sii jirtaa Masiixi. Markaa lagu xorayn maayo.
Inta badan Masiixiyiinta Reer Galbeedka iyo Kuuriya wax fikrad ah kama qabaan waxa ay sharci ahaan u leedahay qofka muslimka ah inuu noqdo Masiixi. Meeshii dowlad xor ah aysan dilin riddada, qabiilkiisa aasaasiga ah waxaa waajib ku ah in ay tirtirto magac xumada magacooda oo ay disho dabeecadda 'cibaado la'aanta'. Sacuudi Carabiya iyo Iiraan, iyo Pakistan iyo dalal kale oo Islaamiyiinta muxaafidka ah, xukunka dilka waxaa si cad loogu fuliyaa iyadoo la rumeysan yahay riddada. Boqorkii hore ee dalka Morocco, Hassan II, oo mar su’aalo weydiiyay wafdi ka socday hay’ada Amnesty International, ayaa ku jawaabay: “Dalkeenna waxaan ku leennahay sharciga aasaasiga ah: Eebbe, boqorka iyo waddanka. Markuu qof yimaado oo ku adkaysto inuu jiro diin ka wanaagsan kan Islaamka, waa inaan ku baaraynaa gacanta khabiirada caafimaadka si loo ogaado bal inuu weli maskaxdiisa ku habboon yahay. Haddii ay sidaas tahay oo uu sii faafinayo gaalnimadiisa waa inaan ciqaabnaa. ”
● Dhammaan Masiixiyiinta miyey muslimiin yihiin?
Tijaabinta ugu adag ee qofka rumaystaha ah ee cusub wajihi doona wuxuu ka yimaadaa qayb ka mid ah kuwa adeegayaasha ah kuwa wanaagsan. Qur'aanka dhexdiisa waxay ku arkeen laba aayood iyagoo sheegaya in dhammaan Masiixiyiinta Masiixiyiintu yihiin Muslimiin (Suurada Al 'Cimraan 3:52; al-Ma'ida 5:111). Akhristayaashaas aqrinta ah ee Qur'aanka, si kastaba ha noqotee, ma aysan arkin in labadaas aayad ay yihiin dabin furan, oo uu Muxammad u saaray wefti Masiixiyiin ah oo ka yimid Waqooyiga Yemen. Aayadahan dhexdooda ayuu u oggolaaday rasuulladii Masiixu inay qirtaan inay yihiin Muslimiin wanaagsan oo diyaar u ah, sidaa darteed wadaadka iyo boqorka Wadi Nadjran waa inay fahmaan: Haddii rasuulladii ciise ay muslimiin yihiin - markaa annaguba waa inaan nahay muslimiin-masiixiyiin! Markaas nabad baa nalooga tegi doonaa oo laguma silcin doono. Laakiin boqorka iyo hoggaamiyaha kiniisaddu si feejignaan leh ayay naftooda u galeen oo kuma ay gelin dabinka. Waxay sii ahayeen Masiixiyiin, waana la jebiyey oo laga eryay waddankooda dhowr sano kadib. Maanta khudbadda Muxammad ee faaqidaadda leh ayaa mar labaad ku faafay dhammaan waddammada islaamiga oo dhan: “Uma baahnid inaad Masiixa si furan oo dhinac keliya u jeesatid. Rumayso Eebe iyo weliba Muxammad! Waxaad noqon kartaa islaam iyo masiixi isku mar. Sida ay Yuhuudda Masiixiyiinta ahi leeyihiin, sidoo kale waxaa jiri kara Masiixiyiin Muslimiin ah!”
Nebiyadan beenta ahi ma yaqaanaan islaamka mana tixgelin ereyada muhiimka ah ee Ciise iyo rasuulkii Bawlos. Islaamku waa ruux ka soo horjeeda Masiixiyiinta (1 Yooxanaa 2:21-25 iyo 4:1-5) wuxuuna matalaa muujinta khaladaadka ah ee uu soo maro malaa'ig dhacday (Galatiya 1:8-9). Muslimiintu waxay ku xidhan yihiin wada jir waxayna u baahan yihiin in lagu sii daayo awooda Masiixa. Haddaad u maleynaysid inaad muslimiinta ku wacdiyi kartid adoon lahayn iskutallaabta Ilaah ee lagu qodbay waxaa lagu xukumi doonaa ereyada Ciise ee Matayos 10:32-33; 16:23-25; Rooma 1:16-17; 1 Korintos 1:18-24 et al.
Madaxweynihii dambe ee dalka Suudaan Turabi wuxuu ka faa’iidaystay labadan aayadood Qur'aanka wuxuuna si rasmi ah ugu dhawaaqay in dhammaan Kiristanka ku nool Suudaan yihiin Muslimiin iyo in ragga Masiixiyiinta ah ay guursan karaan gabdhaha Muslimka ah ee reer Suudaan. Sidaas ayuu raacay talaabadii Balcaam oo taladii Baalaaq kula taliyay inuu dadka ku aqoonsado guur isku qasan oo reer binu Israa'iil ah. Sidaa darteed caadooyinka qabiilku waxay liqi doonaan reer binu Israa'iil oo dhan sannado yar gudahood (Tirintii 31:16; 2 Butros 2:15; Yuudas 11; Muujintii 2:14). Turabi waxaa cambaareeyay culimada diinta ee sacuudiga iyo carabta asaga oo ka soo horjeestay qaabkiisa ka dhanka ah islaamka.
● Macnaha guud - qalad?
Ujeeddada macallimiinta macnaha guud ee macnaha guud waa iska caddahay. Haddii qofka Masiixiyiinta ahi u muuqdo inuu yahay Masiixi isla markaana uu yahay Muslim, laakiin Masiixi ah isla waqtigaas, uma silcin doono silica, xanuunka iyo dhimashada, oo wuxuu kaniisaddiisa ka badbaadin doonaa dhibaato, qatar iyo allabari. Laakiin macallimiintaas ayaa iska indhatiraya xaqiiqda ah in qofku aanu ku qasin karin biyo iyo dab, oo habeenkaas uu ka cararo maalinta. Duulintu waxay u muuqataa oo keliya sidii kala guur, oo aan ahayn xaalad xaalad joogto ah!
Masar gudaheeda, weriye ku xeel dheer arrimaha ayaa ku guulaystay sarkaal ka tirsan adeegga qarsoodiga ee Ciise wuxuuna u ballanqaaday inuu sii joogi karo Muslim isla markaana Masiixi noqon karo isku waqti. Sarkaalku fikirkan aad ayuu u farxay maxaa yeelay jidkaas wuxuu u furay albaabada labada fasalada bulshada isaga. Waxa uu ku badiyay muslimiin badan qaabkan islaamnimada ah. Laakiin hal sano iyo badh ka dib wuxuu dareemay inuusan ahayn kalluun ama hilib, ama uusan ahayn Muslim wanaagsan ama Masiixi run ah, wuxuuna dalbaday in lagu dhigo kaniisad kale. Kadib asxaabtiisii adeega qarsoon waxay ku eedeeyeen inuu ka baxay diinta islaamka uuna ku ciqaabay dhamaan jirdilkii uu adeegsaday kahor si uu ugusoo celiyo dibindaabinta Islaamka. Laakiin isagu Ciise weli aamin buu ku ahaa asxaabtiisna wuu ku fakaday.
Muddo yar ka dib kooxda oo dhan waxay ku wada duuleen oo waxay galeen xabsi. Wargeysyada maalinlaha ah waxay xanaaq ka qoreen cinwaan mooryaamo ah: "yeeyda masiixiyiinta ah ee ku jirta xeryaha Islaamiga ah waxay iskudayaan inay marin habaabiyaan muslimiinta jaahiliinta ah!
Kuwaas macnaha wanaagsan, saaxiibada sharafta leh laga yaabee in aysan waligood ka fikirin in howsha u dhexeysa muslimiinta loo arko faquuqid iyo in lagu xadgudbay nabadda. Sida Qur'aanku qabo, dembigan ayaa ka daran dil (Suuradda al-Baqara 2:217). Ku alla kii dhibaato dalka ku abuura waa la dili karaa ama iskutallaabta lagu qodbi karaa. Sidoo kale, goynta mid ka mid ah gacmihiisa iyo lugta ka soo horjeedda ayaa lagu xukumi karaa isaga, ama waa laga saari karaa waddanka (Suuradda al-Ma'ida 5:33). Marka loo eego Qur'aanka iyo shareecada, marin-habaabinta waa dambi culus. Kuwa wax khiyaaneeya iyo sidoo kale kuwa qalloocanba waa in lagu xukumo dil, haddii ay u dhaqmayeen sidii teendhooyin sameeyayaal-adeegayaal ama ay u noolaayeen sida Masiixiyiin-Masiixiyiin ah.
Markhaatiga Masiixa oo u labisanaya qof Muslim ah oo iska dhigaya inuu yahay Muslim laakiin runtii waa addoonkii Masiixa, waxaa loo arkaa sharci ahaan inuu yahay muslim ka soo noqday diinta Islaamka, waxaana lagu xukumay ciqaabta dilka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagu gartaa inuu yahay munaafaqiin, khiyaano iyo khaniisiin. Sida ku xusan shareecada waxaa lagu dili karaa isla goobta, iyada oo aan wax xukun ah aan dhicin.
Qofka muslimka ahi badanaa ma yaqaaniin shuruucda faahfaahsan ee Shareecadiisa. Qof kasta oo ka dhex shaqeeya Muslimiinta waa inuusan ku keenin Ciise kuwa dhakhsaha badan isla markaana heer sare ah. Iskusoo wada duuboo, ma aha in goor hore la baabtiiso. Qofka dhalinyarada ah ee muslinka ahi waa inuu ogaadaa micnaha ay leedahay in la noqdo Masiixi. Balanqaadka ruuxiga ah ayaa ka muhimsan warbixinnada soo jiidashada badan ee la baabtiisay. Tayada waa inay timaadaa kahor intaan tirada la isticmaalin!
Haddii qof ka fekero talaabooyinkan kala duwan ee ah sida shakhsiyaadka muslimiinta ahi uga soo baxaan mujtamaca islaamka, qabiilka iyo qoyskooda, wuu fahmi karaa in qofka badalaya inuu isu dhiibi karo ereyada Rasuul Bawlos:
Adiga daraaddaa ayaannu maalinta oo dhan u dhintaa dhimashada, Waxaa nalagu tiriyaa sidii ido oo la gowraco. Laakiin waxyaalahaas oo dhan, innaguna waxaynu kaga guuleysannaa kii ina jeclaa. Waxa aan aaminsanahay in dhimasha ama nolosha, malaa'igaha iyo jinniyada, ama hadda ama mustaqbalka, ama wax xoog ah, ama dherer ama qoto dheer, ama wax kale oo uunka oo dhan ka soo bixi kari waayaan jacaylka Ilaah oo ah xagga Ciise Masiix Rabbigeenna. (Rooma 8:36-39)
8.04 -- Isdhaxgalka Isbadalada Kujira Kaniisadaha
KaniisadahaIs dhexgalka kaniisadaha jira ayaa had iyo jeer u muuqda qaybta ugu xasaasisan ee saddexda dhibaato ee weyn ee dadka asal ahaan ka soo jeeda Islaamka, ee raacaya Masiixa, ay la kulmi karaan. Kaniisadaha Orthodox, Roman Catholic iyo Protestant-ka ee ku yaal Aasiya iyo Afrika, iyo mararka qaarkood xitaa Yurub dhexdeeda, uma muuqdaan inay aqbalaan rumaystayaal cusub oo ka yimid Islaamka. Sababo kala duwan oo go'aankan ah ayaa loosoo qori karaa sida soo socota:
● Mararka qaar muslimiintu waxay sugayaan kaalmo dhaqaale waxayna diyaar u yihiin inay diintooda u beddelaan sida funaanad loo isticmaalo lacageed awgood - laakiin heer sare ah, iyo ilaa inta lacagtu sii socoto. Cuntada aad cuneyso, heestiisa ayaad ku heesi doontaa!
● Had iyo jeer gabar, oo rumeysan Masiixa, waxay soo kaxeeysaa wiil dhalinyaro ah oo muslim ah si loogu baabtiiso, si ay isaga ugu guursato. Waxay ogyihiin in guur isku qasan aan lagu soo dhaweyneyn bulshada dhexdeeda. Ujeedada noocan oo kale ah waxay ku habboonaan kartaa labada dhinacba, laakiin qabiilka, sharciga iyo bulshada ayaa ka soo horjeedda. Noocan beddelaad badanaa waa kuwa aan daacad ahayn, waxayna sababi kartaa dhibaato badan.
● Sida ku xusan shuruucda Islaamiga ah ee dadka laga tirada badan yahay nooc kasta oo ka mid ah howlaha adeega muhaajiriinta ee muslimiinta waa ka mamnuuc Kiristanka asaliga ah (Suurada al-Baqara 2:217; al-Ma'ida 5:33). Kaniisad u dulqaadanaysa wacdinta ka dhextaagan muslimiinta “mid” xubnihiisa waa in la ciqaabaa aakhirkana la xidhaa. Waan fahmi karnaa in wadaaddada, wadaadada, iyo kiniisadaha ay fiiro gaar ah u yeeshaan si xubnaha kaniisadda midkoodna uusan uga qeyb qaadan doonin wax wacdinta ka dhex dhaca muslimiinta si furan ama ay u xilsaareen guddiga maamulka ee kaniisaddooda, sababta oo ah markaa markaa kaniisaddoodu waxay noqon kartaa ay xidhay dawladdu.
● Kooxo wacdiyayaal ajnabi ah ama kuwo wadaniyiin ah ayaa mararka qaarkood u qaata muslimiinta xiisaha u qaba kaniisada maxalliga ah si wadaadka u baabtiiso oo u qaato rumaystaha cusub. Kadib waxay la yaabeen odayaasha masuulka ka ah inaysan wax dan ah ka lahayn una diidaan inay aqbalaan qofka cusub. Taasi waa wax la fahmi karo, waayo koox wacyigelinta ah waa inaysan shaqeynin aqoon la’aan odayaasha qaarkood, kuwaasoo sii wata howlahooda oo taageera. Waayeelladaas waa in horay loo sii ogeysiiyo, si ay u taageeraan adeegyada kooxda firfircoon salaadda oo ay diyaar u ahaadaan inay aqbalaan rumaystayaasha cusub qoysaskooda si looga ilaaliyo weerarada oo dhan, loona hago tillaabooyinkooda dambe.
● Shimbir raba inuu ukumo jiifsado ayaa buulkeedii dhisaa marka hore, ma ahan qaab kale! Dhamaan asxaabta diyaar u ah inay ka qabtaan shaqada wacdinta ee wadamada islaamka waa inay marka hore dhisaan kooxaha salaada gudahooda ama banaanka kaniisadaha jira, kuwaas oo taageera howlaha soosocda, baahiyaha iyo waajibaadka. Haddii mid mid u ururiyo kooxaha salaadda noocan oo kale ah wuxuu arki doonaa midho badan waqti dheer marka loo eego nooca adventurous kaasoo goor dhaw ka bixi doona garoonka. Kaniisadaha waxaa ku jira dad tiro yar kuwaas oo danaynaya in ay gaaraan dadka aan Masiixiyiinta ahayn. Waa inaad u duceysaa inaad raadsato.
● Wada shaqeynta bulshada
Haddii qofka Muslimka ahi, inta lagu gudajiro isbadalkiisa ruuxiga ah iyo ka dib cayrintiisa xanuunka badan ee beeshiisa iyo beeshiisa uu kudhawaaqo inuu xiriir la sameysto rumaystayaasha ama xitaa kaniisad ama uu isku dayo inuu la xiriiro masiixiyiinta, wadaaddada iyo wadaaddada, inta badan aad ayuu u naxay. Wuxuu dareemayaa: iima aaminaan! Waxay u maleynayaan inaan ahay tuug, ama waxaan rabaa inaan kufsado mid ka mid ah gabdhahooda, ama ay ka shakiyaan inaan ahay basaas! Waxay u eg tahay sidii baaldi biyo baraf qabow loogu shubay isaga intuu isagu albaabka u galayo Masiixiyadda!
Dabcan, Muslimiintu waxay adeegsadaan ereyo kal duwan oo nolol maalmeedka ah marka loo eego inta badan Masiixiyiinta, haddii ay adeegsadaan isla ereyada, waxay wataan macno kala duwan. Waxay u labistaan oo u dhaqmaan si ka duwan Masiixiyiinta si kuwa dhaq dhaqaaqa dhaqsaha leh u ogaadaan inay kala duwan yihiin. Labada dhinacba waxay dareemayaan darbiga aan muuqan.
Waxa ugu horreeya ee qofka beddelayaa wuxuu u baahan yahay kalsooni, faham iyo jacayl! Iimaanka, walaalaha tukanaya waa inay yimaadaan oo ay la kulmaan, la hadlaan, ku marti qaadaan guryahooda oo ay isaga dareensiiyaan: Waxaad tahay midkeen, waan isku nahay! Laakiin fal-dambiyeedkan oo kale ma aha inuu sameeyo qoys halkaas oo ay ku sugan yihiin gabdho guur-guur ah, sababtoo ah markaa markaa casuumadda waa la fahmi karaa.
Kaniisadda, si kastaba ha noqotee, waa inay noqotaa buul ay ku beddelato ku-beddelasho dib-u-dhalasho guriga ah. Xiriirka lala yeelanayo kuwa raacsan Ciise waa kan cusub "annaga" isaga, oo isagu doonayo iyo wuxuu u baahan yahay ka dib markii laga saaray qabiilkiisa. Kaniisadda waa qoyskiisa cusub marka laga reebo kuwa yar oo badbaadin kara. Waxaa muhiim ah in loo diyaar garoobo bulshada inay aqbalaan kuwa beddela, sida ay runtiina tahay in la gaaro.
Waayeellada iyo wadaaddada waa inaysan dhiirrigelin ama u oggolaanin rumeeyaha cusub inuu bixiyo markhaatiga iimaankiisa minbarka ama miisaska sarsare. Waxay noqon laheyd wax-soo-saar wanaagsan in qofka beddelaya uu u muuqdo mid weyn oo muhiim ah - wuxuu dhakhso u duuli doonaa sida buufin oo kale. Waa in la siiyaa adeegyo yar oo bulshada dhexdeeda ah iyo howlo mas'uul ah oo kooxda dhexdeeda ah, si uu u dareemo in la aqbalay oo loola dhaqmay sida kuwa kale. Sidii annaga oo kale isagu waa dambiile xaq ah nimcada Ilaah.
Marka ubadku aqbalo qoys Masiixiyiin ah waa inay sidoo kale ilaaliyaan. Marti gelinta bariga dhow waa muqadas muslimiinta iyo masiixiyiinta. Waxaa jiray walaal ka joojiyey dariiqa aargudashada ehelka albaabka wuxuuna u sheegay: kaliya meydkeyga meydka ma gaarsiin kartaa walaalkeen baxsadka! Waxay u baxeen si guul darro ah, iyagoo ka careysan dhaqanka carabta ee soo dhoweynta.
● Dhididkaaga wajigaaga waxaad cuni doontaa cuntadaada!
Marka qofka muslimka ahi noqdo masiixi oo weli ku nool xaafad muslim ah wuxuu badiyaa shaqadiisa waayayaa maxaa yeelay waxaa loo arkaa inuu yahay inkaar allah, malaa'igtiisa iyo dhamaan muslimiinta (Sura al-Baqara 2:161). Iyaga, isagu wuu nijaasoobay (Sura al-Tawba 9:28). Ma jiro qof muslim ahi inuu xidhiidh la yeesho ninkan hilibka doofaarka iyo khamriga caba, hana u dhiibin shaqo!
Waa hawl deg deg ah wadaadka kaniisadda ama hogaamiyaha liiska raadinta si uu u helo ama ugu abuuro shaqooyin kuwa rumaystayaasha cusub ee Masiixa. Kuma filna in qoysaska loogu yeedho cashooyin cusub qadada. Mustaqbalka fog taasi waa arin sharaf dhac ah. Sidoo kale, kuwa badalaya waa in aan lagu dirin hadiyado lacag yar ama weyn. Taas waxaa loo tixgelin doonaa inay sharaf-dhac u tahay Muslim sharaf leh! Ma aha tuugsanaya, laakiin waa walaalo iyo walaalo. Waxay u baahan yihiin waa shaqo adag ama tababar xirfadeed. Qaarkood waa inay xitaa bartaan sida adag ee loogu shaqeeyo. Dhibaatooyin badan ayaa ka jira aaggan. Wadaad ayaa qolkiisa kaniisadda rinjiyeeyey dhowr jeer sanadkii, si uu ugu abuuro shaqo ku beddelashada. Wuxuu doonayay inuu iyaga ku caawiyo si kasta. Qaabkaas wuxuu ku siiyay dareen ah inay qabteen shaqo qiimo badan. Wadaadada kale waxay ka codsadeen inay xareeyaan alwaax, qodaan beerta, nadiifinta guriga iyo barxadda, u shaqeeyaan sidii farriin, noocan oo kale ah qoraallo, u turjubaanno, u iibiyaan buugaag ama qabtaan shaqooyin kale, si loo siiyo shaqo dhab ah oo aan kaliya ahayn bakteesh.
Kuwa beddelayaa badanaa ma laha tababar xirfadeed ama waxbarasho dhammaystiran oo dugsiga ah. Gabdhaha qaarkood waxay u baahan yihiin tababar ku saabsan tolidda, ragga dhallinyarada ah ee kombiyuutarka, tijaabooyin sidii taksi-wadis ama deeq waxbarasho si ay u dhammaystaan dugsiga. Intaas oo dhan waa lacag. Lacagtaas waa inaan loo bixinin si shuruud la'aan ah, laakiin loo bixiyo oo kaliya sidii amaahdii dib looguugu soo celin lahaa. Bilowgii, ma aha in lacag badan la bixiyo. Kaliya marka lacag yar oo si aaminnimo ah dib loogu celiyo, waxaa laga yaabaa inaan dib u bixinno amaahdii weynayd ee dib loogu bixin lahaa. “Ku alla kii wax yar lagu aamini karo wax badan ayaa lagu aamini karaa wax badan, oo ku alla kii wax yar ku khiyaaneeyey wax badan buu xaq ku noqon doonaa wax badan” (Lukos 16:10).
Munaasabad ayaa nin muslim ah ka soo muuqday bulshada Kitaabka Qudduuska ah oo ku taal magaalo Islaami ah wuxuuna weydiistay Kitaabka Quduuska ah inuu ka iibiyo suuqa dhinaca lugku socdo. Markii wakiilku ka gaabsaday, ayuu Muslimku yidhi: "I tijaabi oo i sii laba Kitaab oo keliya, ka dib waxaan ku soo celin doonaa lacagtii mid ka mid ah Baybalka, waxaanan ku hayn doonaa lacagta kii labaad sidii lacagtaydii." Isla maalintaas iibiyaha waddada ayaa keenay lacagtii wuxuuna heley afar Baybalka. Laba maalmood ka dib wuxuu u keenay lacagtii laba Kitaab oo wuxuu qaatay siddeed Baybalka. Wuxuu aamin ku ahaa qaddarka yar, sidaa daraadeedna ma jirin wax khatar ah oo aaminka ah oo lagu aaminay mar dambe 16 ama 20 Kitaab ah, oo uu ku iibiyey suuq furan halkaas oo uusan Masiixi ku dhiiran karin inuu bixiyo Kitaabka Quduuska ah.
Marka shaqooyinka cusub la helo ama la abuuro waxay cadeysay inay haboon tahay in koox duco ah ay taageeraan kooxda wacdinta. Maaddaama dadka tukanaya badankood waliba ay shaqeeyaan, waxay u badan tahay inay ogaadaan meesha iyo goorta ay jiraan shaqooyinka banaan.
Wacyigelinta dadka ee muslimiinta ahi kaliya maahan macnaheedu waa la talin xagga ruuxa ah laakiin sidoo kale daryeela baahiyahooda jir ahaaneed. Ka dib markii koox ardayda dugsiga-Bible-ka ah, oo u adeegay jasiiradda Fort Lamy ee Badweynta Hindiya, ay dib ugu soo noqdeen niyad-jab iyo qalbi jab, ka dib guushii afgambiga, ayaa dhalinyaro dhalinyaro ah oo Muslim ah oo jasiiraddaas ka soo muuqday albaabka mid ka mid ah ardayda usbuuc kadib. Wuxuu u sheegay inuu soo qaatay oo akhriyey mid ka mid ah buugahooda, oo la tuuray. Dantaas awgeed kaliya waxaa tuuray jasiiradaha fanaaniinta ah. Ardayga iskuulka-Bible-ka, oo albaabkiisa ka eryay saaxiibkiis ayaa garaacay macalinkiisii: "Maxaan ku sameeyaa ninkan dhalinyarada ah?" Markii uu maqlay jawaabta: "Waxaad heshay walaal," wuxuu ku jawaabey markiiba. Haa, walaalo ruuxiga ah! ”Markii la weydiiyay wuxuu sameyn lahaa haddii walaalkiis albaabkiisa garaaco isagoo baxsad ah, wuxuu yiri," Waxaan u furi lahaa albaabka ballaaran waxaanan ku iri: 'Sariirtaydu waa sariirtaada iyo qaboojiyaha Waa kuu furan yahay. '”Markii ardayga iskuulka iskuulka loo sheegay in qofka muslimka ah ee la cayriyay uusan ahayn kaliya ruux ruux ah laakiin sidoo kale walaalkiis dhabta ah ee uu masuul ka ahaa, wuu madaxa foororsaday isagoo ceeb ah maxaa yeelay wuxuu fahmay howshaas muslimiinta kaliya maahan. macnaheedu waa adeega ruuxiga ah ee Ereyga, laakiin sidoo kale allabaryo wax ku ool ah.
● Ma wanaagsana in nin keli ahaado!
Qof kasta oo aan wali ku guursan sidii nin dhallinyar ama gabadh 30 sano ku leh dunida Islaamka waxaa tuhunsan inuu ka shaki qabo qabiilkooda iyo asxaabtooda waxaana loo arkaa inay yihiin kuwa aan caafimaad qabin ama caadi ahayn. Waa lagama maarmaan in nin kasta oo lab ama dheddig ah beddela inuu raadsado lammaane is qaba oo rumeysan Masiixa.
Dad badan oo muslimiin ah ayaa u arkaa baabtiiska kaliya mid kamid ah ducooyinka badan ee uu Muslimku waajib ku yahay inuu sameeyo kahor tukashada. Laakiin markii uu guursado gabadh Kirishtaan ah jebinta u dhaxeysa isaga iyo qabiilka iyo bulshada Islaamka (Umada) ayaa ugu dambeysa. Guurka haweeney Christian ah waxaa loola jeedaa muslimiin fara badan oo xasilooni badan marka loo eego baabtiiska.
Waa wax laga xumaado in waalidiinta Masiixiyiinta ah ay marar dhif ah u oggolaadaan in gabdhahooda guursadaan kuweeda. Waxay ka baqayaan qaabkiisa nololeed ee Islaamka, inuu ku garaaco gabadhooda. Haddiiba uu ku dhawaaqo caqiidada Islaamka laba jeer markuu cadhoodo, wuxuu ku noqon karaa Islaamka. Markaas carruurta oo dhami waxay lahaan doonaan isaga oo keliya, oo naagtiisuna waxay dhaxli kartaa mid keliya siddeed dalool wixii ay hantiyeen.
Dhanka kale, gabdhaha muslimiinta ee hore waxay door bideen inay guursadaan masiixiyiin diinta masiixiyiinta ah si ay u haajiraan. Markaa waxay ka tagi jireen rumaystayaasha asaliga ah keligood, iyagoo aan guursan. Sidaa awgeed kan dambe waxaa la faray inay guursadaan gabdhaha muslimiinta ah. Kadib caqiidada qofka badala waxay khatar kujirtaa, maxaa yeelay xaaskiisa muslimka ah waxay codsan kartaa furiin waqti walbo maadaama uu ka baxay diinta islaamka, oo ay caruurtoodii oo dhan iyo xoolahooda oo dhami iska leeyihiin.
Xikmadda iyo hagida naxariista leh ee xagga Ciise Masiix waa mid aasaasi ah sidaa darteed laba lammaane oo rumeysan - haddii ay suurta gal tahay, labadooduba islaam - midba midka kale ha helo. Kaliya markaa waa nolosha qoyska ee barakaysan magaca Ciise ayaa la hubiyaa. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa aasaaska kiniisadda guri cusub. Kaliya haddii labada lammaan ay ku heshiiyaan qaadashada khatarta shirarka qarsoodiga ah ee gurigooda ayaa kulamadaasi dhici karaan. Haddii kulamada noocan oo kale ah la ogaado, labada lammaane waa la xiri karaa oo hantidoodii waa lagala wareegayaa. Guurka magaca Ciise Masiix waxay leedahay cawaaqib xumo aad u badan waana hab lagu aasaaso kaniisadaha guryaha cusub.
Walaalaha mas'uulka ka ah kaniisadaha jira waa inay bixiyaan xiriiro u dhexeeya ragga dhallinyarada ah ee Christian iyo gabdhaha guurka leh, si ay u kulmaan oo ula hadlaan. Taasi waa mid aad u dhib badan meelaha islaamiga ah ee islaamiga ah laakiin wax dhibaato ah kuma dhicin magaalooyinka waaweyn. Qaabka ay dhalinyarada iyo gabdhaha ugu wada nool yihiin jaamacadaha, maktabadaha, gegooyinka diyaaradaha iyo jardiinooyinka ayaa si cad u muujineysa sida ay wax u socdaan.
Tusaale ahaan, oo umuuqda mid duug ah ayaa naga hor imaan kara inaan si ka sii fiican u qabanno:
Dalka Morocco waxaa ku noolaa nin Christian ah oo qurux badan oo madax u ahaa iskuul. Ma uusan helin lamaane ku habboon noloshiisa. Markaasuu yidhi, Waxaan axdi la dhigtay Aadan. Siduu Abuuraha u oggolaaday Aadan inuu ku seexdo hurdo dhaadheer, ka dibna uu ka qaado feeraha mid ka mid ah, oo uu ka abuuray Xaawa oo ah naagtii ugu quruxda badneyd adduunka, oo haddana u soo bandhigtay wixii ka dambeeya, habkan dambe dib uma eegi doono naag, laakiin waxay sugi doontaa Rabbiga inuu ii soo bandhigo kuwa ugu wanaagsan oo dhan.
Oo Sayidku wuxuu u diray walaashiis duug ah oo duug ah oo salaamaysa oo tidhi, Amiir, waa la gaadhay xilligii la is guursan lahaa! Gabdhaha Masiixiyiinta ah ee dhammaantood doonaya inay guursadaan kuwa raaca Masiixa. ”-“ Heersare, ”Amiir ayaa ku jawaabay. Gabadhii odayga ah ayaa hadalkeedii sii wadata, "Hadda adigu adigu mid ka dooro kuwan. Amiir ayaa ku jawaabay," Laakiin anigu garan maayo gabdhahaas. Waad soo qaadataa qalin, indhahaaga xir, duceyso oo gacantaada saar warqad. Midka ay dhibicda dhibca qalintiinu tahay, waa gabadha Rabbigu kuu diyaariyay. Amiirku wuxuu ku hadlay, "Waan dhimanayaa!" Marwada ayaa ku jawaabtay, "Ha walwelin. Hadda waxaa la joogaa xilligii la is guursan lahaa. ”Amiir wuu murugoobay, qalin u qaatay, oo gacantiisa gariiray warqada, indhihiisa u furay oo akhriya magaca kan la doortay. Xagee bay ku nooshahay? ”500 KM halkan, koonfurta, xeebta,” ayaa jawaabtu ahayd. Gaarigaaga kaxee, oo hoos ugu dhaadhac iyada oo u sheeg iyada oo leh, 'Ilaah baa ii soo diray si aannu u guursano.'
Kala badh naxdin leh, Amiir wuxuu watay gaarigiisii, wuu baxay, oo wuxuu yimid meeshii ay ku nooleed, wuxuu helay gurigeedii, gambaleelka buuqa, iyo - mucjiso - guriga ayey ku aheyd. Wuu dhammeeyey fariintiisii runtiina - way is guursadeen in yar kadib.
Bilo kadib, si kastaba ha ahaatee, Amiir wuxuu u qoray asxaabtiisa: U soo ducee in aan barto inaan jeclaado xaaskayga, waayo waxay leedahay madax adag mana rabto waxa aan doonayo, iyo markii ay wax rabto, anigu ma doonayo taas midkoodna. Nolosheennu waxay noqotey geeri joogto ah. Masiixi ahaan, ma doonayo inaan garaaco ama ma furo. U soo ducee si aan u barto sida aan u jeclahay xaaskayga adag. - Maanta waxay leeyihiin dhowr caruur ah waana lamaane barakaysan, ka dib markay isku dheceen labada dhinac ee afka fiiqan.
Qofkasta maaheli doono hababka walaashaas duugga ah, mana ku talinayno mana fulinayno! Laakiin waxay ku midowday wada-hawlgalayaal badan oo Masiixiyiin ah guurka marka loo eego aqoonyahanno badan oo caqli badan. Rag badan oo dhallinyaro ah ayaa calaacalay oo yidhi, Hoogay, Sayidku sidoo kale malaa'ig buu ii soo diray!
Wadamada Islaamiga ah sida Marooko, ma jiraan guur guur, waxaa lagu sameyn karaa oo keliya horteeda sheekhu xafiiskiisa. Laakiin kiisaska badankood hadiyad gaar ah ayaa ka caawisa inuu saxeexo waraaqda lama huraanka ah isagoo aan joogin xafladaha xafladaha, si uusan qofna ugu gacan qaadin Quraanka. Laakiin carruurta guurkaas oo kale wali waa muslimiin. Wadamada sida Morocco ma jirto qaab sharci ah oo lagu badalo qofka diintiisa ku xiran ee lagu diiwaan geliyo baasaaboor!
Marka qofka badala iyo haweeneyda mu'minka ah guursato tani waxay ka dhigan tahay dalal badan oo islaam ah in laba qabiil ay mideysan yihiin. Wadahadalka, cilmi baarista iyo wadaxaajoodka ayaa lama huraan ah ilaa inta lacagta aroosadda la bixiyo oo dhammaan dhinacyada ay raalli ka yihiin. Kadib xafladda qoyska ee ku biireysa labada beelood, lamaanayaasha da'da yar ee Masiixiyiinta ah ayaa had iyo goor u dabaaldega xaflad guur labaad oo ka dhacda kaniisaddooda dhulka hoostiisa ku jirta, taas oo ay u tixgeliyaan bilowga dhabta ah ee noloshooda guurka.
Marka laga reebo dhibaatada raadinta lamaanaha ku habboon guurka, inta badan waxaa jira dhibaatooyin kale oo ka dhaca waddamada Islaamka:
Ku-beddelayaasha is-guursaday mararka qaarkood looma aqbali karo isugeynta sababtoo ah waxay leeyihiin afar haween ah iyo carruur aad u tiro badan. Suudaan dhexdeeda, kaniisad ayaa go’aansatay inay baabtiiso qoysaska waaweyn sida oo kale oo ay aqbasho, haddii madaxa qoysku uu hortiisa ku qirto inuu dembaabay isaga oo aan ogayn oo uu raacay sharci qaldan. Isagu ma furi karo xaasaskiisa iyo carruurtiisa maxaa yeelay isagaa mas'uul ka ah iyaga. Waa inuu si furan u oggolaado xaqiiqda ah, in xaaladdiisa aan kitaabiga ahayn, uusan qaadan karin mas'uuliyad kasta oo ah oday kaniisadda.
Gudaha Hindiya, dhakhtar caafimaad oo leh afar xaas iyo 20 caruur ah ayaa noqday Masiixi. Wuxuu go'aansaday inuu wacdiyo xaasaskiisa oo uu sii haysto kan aqbala Injiilka. Wuu furay dhammaan intii kale oo diiday wiilkii Eebbe, laakiin carruurtiisii oo dhan wuu wada waday. Aargudashada wiilka curadka ah ee mid ka mid ah hooyooyinka shaqada laga cayriyay waxay ahayd inuu aaso aabihiis markuu dhinto dariiqa Islaamka!
Ku biiritaanka kaniisadda, shaqo helista iyo sameynta guurka masiixiga waa sedex tillaabo oo muhiim ah oo loogu talagalay ku biirista kuwa badalaya kaniisadda masiixiga. Dhibaatooyinka la xidhiidha talaabooyinkan waxtarka leh waxay mararka qaarkood u baahan yihiin duco, iimaan, waqti iyo xoog badan marka loo eego wacdinta qofka muslimka ah iyo ka soo goynta beeshiisa. Kuwa baddaliin badan ayaa iimaankooda ka qariya Ciise Masiix amarkooda qayb ahaan ama gebi ahaanba, ilaa ay iyagu iscaawinayaan oo ay ku dhex noolaan karaan rumaysadkooda lammaanaha Masiixiyiinta ah.
● Horumar daran
Ka dib u beddelkiisii Masiixa, Masiixiise da 'yar weli wuxuu ka fog yahay inuu noqdo Masiixi qaangaar ah. Wuxuu u baahan yahay waqti si uu ugu koco iimaan, jacayl iyo rajo. Waa inuu, sidii annaguba u baahan yahay, u akhriyo Kitaabka Quduuska ah si joogto ah oo go'aannada uu u gaaro tukashada. Waa inuu bartaa sida loo dadka kale u cafiyo, sida uu Ciise u cafiyey (Matayos 6:14-15). Amarka Masiixa ee ah inuusan xukumin dembiyada dadka kale ayaa lagu daray (Matayos 7:1-5).
Qofka badalayaa si dhakhso ah ayuu u arkaa daciifnimada waxyaabaha kale ee Chris-tians. Wuxuu arkaa sida wadaadku ugu leexdo minbarka isagoo madaxiisa kor u qaadanaya oo minbarka ka wacdiyaya qaab ka duwan qaabkiisa caadiga ah ee loo hadlo. Wuxuu arkaa inay kaniisado ku leeyihiin Masiixiyiin hodan ah iyo kuwa faqiir ah iyo in kuwa taajiriinta ah in badan la ixtiraamo, halka kuwa faqiirka ahna la iska indhatiro oo si dhib yar loo dareemo. Bandhigga moodada ee adeegga axadda ayaa isaga u muuqda isaga sidoo kale hadalka ka dambeeya dhabarka dadka aan goob joog ka ahayn. Laakiin markii qofka ay ka hadlayaan uu u muuqdo, dhammaantood waxay iska dhigaan sidii qof saaxiibtinimo leh. "Munaafaqu waa!" Wadaadada qaar waxay u dhaqmaan sida digaagado u eg baalashooda. Waxaad arkeysaa jaceyl yar, kibir badan iyo daneeyn la'aan. Dhawaan ayuu oran doonaa, “Masiixiyiintu kama fiicna muslimiinta! Waxaa jira kala qeybsanaan, hammi iyo isxilqaannimo dhammaanteed.
Waxa ay tahay inuu badalku bartaan waa qarsoodiga iscelinta, ducada dadka kale, is-diiditaanka, is-eedaynta Ilaah hortiisa, iyo is-hoosaysiinta ruuxiga ah. Sirta Chris-tendom waa in la cafiyo, oo aan la qummanayn! Waa inaan cafinaa walaal iyo gabadh maalin walba 490 jeer oo keliya.
Dhanka kale, waxa loogu yeero "Masiixiyiinta" Masiixiyiinta ah waa inay bartaan inaysan ku dhaleeceyn kuwa ku beddela deg-degga. Weedho badan oo islaam ah ayaa ka gudba bushimahooda, oo aan fiicnayn in la sheego. Nolosha guurka, dabeecadaha Pasha-sida ragga oo kale waa inay dhintaan, iyo rabitaanka Masiixa ee ah inuu u adeego kuwa kale waa inuu koraa. Waxay u baahan yihiin waqti ay ku bartaan inay si xoog leh ugu shaqeeyaan sideed saacadood maalintii, si ay nolol ugu helaan qoysaskooda. Siyaasada waa inaysan cambaareyn cadaawayaashooda, laakiin waa inay jeclaadaan oo u duceeyaan. Nacaybka wadajirka ah ee dadku u qabaan dowladaha deriska ah waxay u baahan yihiin madaxfurasho ballaaran. Borotiinka wasakhda ah ee telefishanka, joornaalada iyo boostada ayaa ku baaqaya xoogga Ruuxa Quduuska ah inuu xiro TV-ga oo uu ka adkaado riyooyinkii foosha xumaa ee ka dhacey. Ciqaabta suugaanta waa in lagu xukumaa mas'uuliyad darantahay xagga Masiixa. Iyadoo aan quduus laga dhigin qofka beddelmayaana ma arki doono Rabbigiisa, midkoodna.
Aaway xalka dhibaatooyinkaas? Masiixiyiin ahaan, waxaan u baahan nahay indhaha hooyadeed markii aan la macaamilayno kuwa beddela, ee ma aha indhaha sarkaal bilays ah. Dambe wuxuu arkaa dambiga wuxuuna qoraa warbixintiisa. Hooyadu sidoo kale waxay aragtaa khaladaadka cunuggeeda, laakiin waxay ku ciqaabi doontaa jacayl iyo rajo ku saabsan horumarintiisa!
Hooyo waxay badashaa xafaayadda ilmaheeda dhowr jeer maalintii. Taasi maahan hawl wacan. Laakiin hooyada, iyo mararka qaar xitaa aabe wuxuu qabtaa shaqadan jacaylka ah dabcan. Muddo intee la'eg? Todobaad? Bil? Saddex bilood? Hadana miyay daalaan oo ay quutaan oo ay ilmaha iskaga tuuraan xafaayadaha ilmaha weelka qashinka ah? Macquul ma aha, qalloocnaan! Sabab? Hooyo waa hooyo hooyo aabeheeduna waa aabe. Waxay nadiifiyaan ilmahooda marar badan, hal sano, laba sano, iyo ka sii dheer, haddii loo baahdo. Jacayl qoto dheer ayaa ku qasbaya inay sidaa sameeyaan.
Waa inaan u adeegaa qofkii hore ee muslimka ah ruux ahaan sanado si uu u noqdo mid si buuxda ula cararay, qoduus ka dhigay una diyaar garoobay inu ku adeego magaca Ciise. Awooda socda ee Wiilka Ilaah ka xoog badan yahay sidii aan u maleyneynay: Mid kasta oo ka dhashay Ilaah wuu ka adkaadaa dunida. Tani waa guushii laga adkaaday dunida, xitaa iimaankeenna. Waa ayo kan dunida ka adkaadaa? Oo keliya kan rumaystaa inuu Ciise yahay Wiilka Ilaah. (1 Yooxanaa 5:4-5)
Jacaylka Ciise Masiix wuxuu nagu qasbay inaan sii wadno u adeegida kuwa ka tagay ruuxa iyo caadooyinka Islaamka isla markaana aqbalay Masiixa iyo camalkiisa. Tusaalaha iyo aaminka Masiixiyiin badan ayaa ah go, aan, sida wadaadka Iskander Jadeed, oo horey u ahaa muslimiin, uu qoray:
Haddii Masiixiyiinta oo dhammi ahaayeen Masiixiyiin dhab ah,
qof muslimka ah ma sii ahaan doono muslimka.
8.05 -- B A A R I S
Haddii aad si taxaddar leh u bartay buug yarahan, si fudud ayaad uga jawaabi kartaa su'aalaha soo socda. Qof kasta oo ka jawaaba 90% dhammaan su'aalaha ku jira sideeda buug-yare ee taxanahan, wuxuu ka heli karaa shahaadada xaruntayaga
Waa kuwee saddexda caqabadood ee ugu weyn ee ay caabudayaasha Sayidku u baahan yihiin in laga gudbo si loogu hoggaamiyo Muslimka Masiixa?
Waa maxay dhibaatada ugu weyn ee Islaamka ka sooceysa diinta masiixiga?
Waa kuma Allah Islaamka?
Muxuu aabaha Ciise Masiix u siiyaa carruurtiisa oon muslimiintu waxba ka ogayn?
Muxuu Eebbe Islaamku weligiis loogu arkaa inuu yahay Aabahayaga jannada ku jira?
Waa maxay nimcada Islaamku ka leedahay macnaha maxayse diinta kiristaanka u leedahay?
Muxuu qofka muslimka ah u weydiisan karaa inuu Allah cafiyo khaladaadkiisa isla mar ahaantaasna ay adag tahay inuu waligiis isu tixgaliyo inuu yahay dambiile?
Maxuu yahay farqiga udhaxeeya in horey looqaaro Islaamka iyo in lagu doorto diinta masiixiga? Maxay dadka muslimiinta ah badanaa ugu “qarxiyaan” shucuur ahaan in kasta oo ay dhintaanhalka Masiixiyiinta carbeed ay u muuqdaan kuwa firfircoon, nadiif ah oo samir badan?
Maxaa Islaamku uga dhex jirin Ruuxa Runta ah? Xaaladaha duruufaha ku jira ee sharraxaadda shareecada ayaa u oggolaanaya qofka muslimka ah inuu been sheego oo xitaa dhaarto?
Waa maxay farqiyada u dhexeeya guurka Muslimka ah iyo guursashada Masiixiyiinta?
Sidee casharada loogu dhigaa iskuulka dhexdiisa macalimiinta Qur'aanka? Maxay carruurtu halkaas uga helaan aqoon ka badan xirfadaha fakarka iyo xalinta dhibaatada?
Maxay Quraanku iyo Shareecadu u baabi'in waayeen addoonsiga, si ay muslimiinta Galbeedka Suudaan maanta u helaan xaq ay ugu yeeshaan addoomo? Sidee ruuxa salka ku haya mabaadi'daani u saameeyaa xiriirka milkiilayaasha warshadaha ama beeraha ay ku leeyihiin shaqaalahooda?
Maxay dimuquraadiyadu weligeed u ahaan doontaa Anti-Islamic? Muxuu Dagaalkii Quduuska ah ee Islaamka ugu adkeeyay ujeedka loo aasaasay dowlad diineed?
Muddo intee le'eg ayay qaadataa inuu qofka muslimka ah dib u habeeyo maskaxdiisa, iskana daayo dhaqankiisii ​​Muslimka uuna noqdo Chris-tian qaangaar ah? Waa maxay sababta macnaha guud ee macquulka ah looga soo horjeedo soosaarista kitaabiga ah ee muslimiinta dhexdooda?
Maxaa loola jeedaa in dad badan oo muslimiin ahi ay weli ku noolyihiin addoonsiga qabiiladooda oo aan weli noqon shaqsiyaad u-qalma? Sidee ayay xaqiiqaddani u saameyn kartaa istiraatiijiyadda wacyigelintayada?
Halkee buu Qur'aanku ku odhanayaa inaysan muslimiintu u qaadin Yuhuudda ama Masiixiyiinta inay yihiin saaxiibo ama la-hawlgalayaal ganacsi?
Muxuu qoyska muslimiinta ah ugu ogolaanayaa xubnahooda inay aqristaan ​​suugaanta masiixiga laakiin mase u diidaan inay noqdaan masiixi? Qabiilkee baa badanaa loo doortaa inuu uga digaan kuwa doonaya inay raacaan Masiixa rumaysadka
Liis noocee ah oo ciqaab ah ayay qaadi doonaan waalidku si ay u badbaadiyaan carruurtooda ama ehelkooda ka taga Islaamka?
Muxuu kan cusub uusan uga tagin waalidkiis iyo qoyskiisa Muslimka ah? Sidee ayuu u dhaqmayaa haddii uusan si furan uga hadli karin diintiisa cusub?
Boqolkiiba immisa muslimiintu waa kuwa xorta ah iyo intee u badan kuwa dhowrsoon, adeecidda Qur'aanka iyo Shareecada?
Sidee qof muslim ah u ogaan karaa buugaagta sheeganaya inay asal ahaan ka yimaadeen jannada oo ay ku jiraan waxyi dhab ah? Qur'aanku ma kitaab ilaah loo waxyooday?
Saddexda Dembiyadood ee Islaamka aan weligood la cafiyi karin? Muxuu ula jeedaa kan Masiixiyiinta ah markii loogu yeedhay Masiixa?
Muxuu ku badalayaa qofkastoo diinta Islaamka ka gala diinta masiixiga in loo xukumo dil toogasho ah xitaa hadduusan Quraanku dalbanaynin dilkiisa?
Masiixiyiinta oo dhan miyaa "muslimiin" sida Qur'aanku sheegayo? Waa maxay ujeeddada dabinkan Muslimka ah khatarahaheehee?
Sidee baybalka kitaabiga ah ee macnaha guud loo kala soocayaa mid ahaanta iyo mid ahaanta ee kitaabiga ah? (Akhri Matayos 16:21-23)
Maxay jacayl aan runta lahayn u tahay been iyo run la’aan jacayl la dilaya?
Halkee ayaa laga heli karaa kaniisado badan oo aan diyaar u ahayn inay aqbalaan kuwa ka beddela Islaamka inay xubin ka noqdaan?
Waa maxay sababaha ugu waaweyn ee hogaamiyaasha kaniisadaha iyo odeyaashu uga gaabsadaan inay aqbalaan ku-beddelashooda Islaamka inay noqdaan bulshooyinka ay wadaagaan? Sidee looga gudbi karaa dabeecaddan xun?
Sidee ayaan ugu aqbalnaa ku-beddelayaasha aaminka ah ee maraakiibtayada kale si ay dareemaan inay guriga nala joogaan oo ay u helaan qabiilkooda cusub iyo "buulkooda" wadaagis?
Waa maxay sababta ay faa'iido ugu leedahay waddamada Muslimka qaarkood in marka ugu horreysa la isugu yimaado kuwa raadinta meheradda dayax gacmeedka ka hor inta aan loo keenin shirarka waaweyn ee kaniisadda?
Waa maxay sababta odayaasha kaniisadaha ay ubadiyaan shaqooyin loogu talagalay kontaraatyada oo sidee bay kuwa ku noqda kuwa aan aqoonta lahayn u diyaarsadaan xirfad? Waa maxay sababta ay u bartaan inay u shaqeeyaan sida ugu adag ee aan u shaqeyno?
Maxay tahay sababta bilowga ah inaannaan u siin kuwa doonaya ama u beddeleynin hadiyado dhaqaale oo shuruud la'aan ah (Baksheesh) oo aan beddelkeeda ku caawin karno deynno yaryar?
Sideen u caawin karnaa kuwa ka beddela Islaamka inay guursadaan Masiixi ah guurka Muxuu qoysaska muslimiinta ah badanaa ugu tixgaliyaa guurka lala yeelanayo Masiixi Masiixi ah inuu ka daran yahay baabtiiska?
Muxuu guurka Masiixiyiinta ee waddamada muslimiinta qaar aan macquul aheyn ugu noqon karin sharci ahaanna u qabsan karaa sidaa darteed kuwa raacsan Masiixa iyo carruurtooda halkaa ku nooli waa inay sii ahaadaan muslimiin ahaan marka loo eego baasabooradooda?
Maxey go'aaminayaan guddiga kaniisadda haddii Msulim oo leh labo, saddex ama afar afooyin uu codsado baabtiis? Miyuu khasab ku noqdaa naagtiisa dheeraad ah? Oo ka waran carruurtiisa ka soo jeeda xaasaskooda kala duwan?
Maxay tahay sababta qofka diinta Islaamka ugu soo guuray inuu guursado Masiixi been ah oo aan u ahayn Muslim? Maxuu yahay natiijada suuragalnimada xaalad kasta?
Maxay dadka muslimiinta ahi ugu badiyaa ay ula yaabaan dhaqanka hogaamiyaasha kaniisada iyo xubnaha kale ee kaniisada? Waa maxay sirta ruuxiga ah ee bulshada Masiixiyiinta ah?
Khaladaadkee ayuu ku kacay dhaqankii dadka ka soo noqday diinta Islaamka ee yaabi kara qaar ka mid ah Masiixiyiinta muxaafidka ah?
Mudo intee leeg ayay tahay in rumaystaha in la cafiyo khaladkiisa xun ee uu qaato isagoo wali u arkaa inuu Masiixi dhab ah yahay?
Waa maxay sirta weyn ee wacyi gelinta dadka Muslimka ah? Muxuu dabagalku wakhti badan uga qaadanayaa waxbarista wacdinta?
Ka-qeybgale kastaa ee su'aashahan waxaa loo oggol yahay inuu isticmaalo buug kasta siduu u arko iyo inuu weydiiyo qof kasta oo lagu kalsoon yahay oo ku yaqaan markii uu ka jawaabayo su'aalahan. Waxaan sugeynaa jawaabahaaga oo qoraal ah oo ay ku jiraan cinwaankaaga buuxa ee waraaqaha ama emaylkaaga. Waxaan kuu duceyneynaa Ciise, oo ah Rabbiga nool, inuu ku nuuri doono, u yeeri doono, soo diri doono, hag doono, xoojin doono, ilaalin doono oo uu kula joogo maalin kasta noloshaada!
ama emayl ku soo dir:
Page last modified on March 24, 2020, at 01:09 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)